Hackintosh သည် Mac နှင့်စျေးအတူတူထွက်သည် ငါက Mac ကပါ
ပါပလော Aparicio | | Mac OS X ကို, Mac ကွန်ပျူတာများ
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်နီးပါးက Psystar ကုမ္ပဏီသည် Mac နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးသိပ်မကြီးသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကတိပေးခဲ့သည်။ Apple မဟုတ်သောကွန်ပျူတာ သူတို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုကိုစနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်ခြင်းသည်ငွေကိုချွေတာခြင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်သာမန်အရာတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးတွင်ငွေစုထားလျှင်၎င်းသည်မထိုက်တန်ပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောပြproblemsနာများမှာယူရို ၁၀၀ ခန့်ပိုမိုသုံးစွဲသင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြောင်းလဲမှုများပြောင်းလဲလာသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တိုးတက်လာသည်။ ယနေ့လူသိများသောအရာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်သည် Hackintosh.
ငါအစကတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာကမင်းတို့လုပ်ရမယ့် Hackintosh ဖြစ်ဖို့ပဲ အလုံအလောက်ဟာ့ဒ်ဝဲနားလည်ပါသည်။ ငါကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲတ ဦး တည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ AAO D250 မှာလုပ်ပြီး Snow Leopard ကိုတပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်နောက်ကွယ်ကကွန်ပျူတာနဲ့ ၄ ရက်လောက်နေပြီး Configurations ကိုမစမ်းသပ်ဘဲမလုပ်ခဲ့ဘူး။ အဆုံးမှာတော့ application တော်တော်များများကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက 4-bit computer ပဲ။ Ubuntu ကိုငါ install လုပ်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ OS X ကို Apple မဟုတ်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ရင်ပြaနာအမြဲရှိမယ်။
1 Hackintosh ဆိုတာဘာလဲ
2 Hackintosh ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
3 OS X နှင့် Hackintosh သဟဇာတ
4 Hackintosh ပြproblemsနာများ
5 Hackintosh ကထိုက်တန်သလား။
6 ဒါကြောင့် Hackinosh ဟာ Mac နဲ့ဈေးအတူတူထွက်လာသလား။
Macintosh ကို ၁၉၈၄ တွင် Apple မှထုတ်လုပ်ခဲ့သောကွန်ပျူတာသည် Apple Lisa ၏စျေးသိပ်မကြီးသည့် home version ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Apple ကွန်ပျူတာများကို Macs များဟုခေါ်ကြသည်။ Hackintosh ဟူသောစကားလုံးသည်ပေါင်းစပ်ထားသောစကားလုံး (သို့) Pun ဟုခေါ်သော“ Hack” နှင့်“ Macintosh” ဟူသောစကားလုံးများနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ Hackintosh သည် တစ် ဦး ကို Hack Macintosh ဒါကို Apple မဟုတ်တဲ့ကွန်ပျူတာ (သို့) OS X သုံးတဲ့ PC မှာတပ်ဆင်နိုင်အောင်
သင် Hackintosh ကိုမဝယ်နိုင်ဘူး။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအခမဲ့ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုဖွင့်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို Apple ကွန်ပျူတာများမှာသာအသုံးပြုသင့်တယ်၊ သူတို့ကိုရောင်းတရားမဝင်ပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတိုးဆိုင်တစ်ခုသို့ သွား၍ ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားကိုတောင်းခံ။ မရပါ။ ရောင်းဝယ်သူထံမသွားနိုင်ပါကခွင့်ပြုချက်မရသည့်ကားတစ်စီးကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကားပေါ်မှာတရားမ ၀ င်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငါတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ အဲဒါကိုလျှို့ဝှက်ထားရမယ်။
ဟုတ်ကဲ့သင်ဝယ်နိုင်သည် ကွမ်းခြံကုန်း အပိုင်းပိုင်း CutoMac သည်ကွန်ပျူတာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Apple မဟုတ်သောကွန်ပျူတာပေါ်တွင် OS X နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းသက်သေပြသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲများကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုကောင်းစွာသိပြီး Mac ကုန်ကျငွေယူရိုတစ်ထောင်ကျော်မကုန်ဘဲ OS X ကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ သို့သော်ကွန်ပျူတာကိုတစ်ခါမျှဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသောသူများအတွက်မူထိုအရာသည်ကောင်းသောမဟုတ်ပါ။ ထဲမှာ tonymacx86 စာမျက်နှာသင့်တွင်အချက်အလက်အားလုံးရှိသည် မည်သည့်မျိုးမဆို CustoMac တစ်ခုကိုဖန်တီးရန် - Mac Mini နှင့်ညီမျှသောတစ်ခုမှ Mac Pro သို့လက်ပ်တော့များမှတဆင့်ဖန်တီးရန်။
OS X နှင့် Hackintosh သဟဇာတ
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် OS X ကိုတပ်ဆင်ရန်၎င်းတွင်ရှိရန်လိုအပ်သည် Extendable firmware interface (EFI) ။ အကယ်၍ သင့်တွင် EFI မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့က USB မှတစ်ဆင့် installer ကိုစတင်နိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့စနစ်ကိုလည်းတပ်ဆင်။ မရပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Processor ကို Intel ဖြစ်ရပါမည်ဤနည်းပညာကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်ကျော်ကြားသောပရိုဆက်ဆာကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့သည်။
အခြားအရာအားလုံးအတွက်၊ OS X ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုမဆို၎င်းကိုပိုမိုကြီးမားသောသို့မဟုတ်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိလည်ပတ်နိုင်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။ ဤတွင်သူတို့ကစားသို့ရောက်လိမ့်မည် the .kext, သူတို့က PC မှာရှိတဲ့ driver တွေလိုပါပဲ။
OS X ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သော Wi-Fi ပါ ၀ င်သည့် hardware အားလုံးကိုအလုပ်လုပ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ configure လုပ်ရမည်။ အဲဒါကို configure လုပ်ဖို့ဒီ tool ကိုသုံးရမယ် MultiBeastOS သည် PC များပေါ်တွင် OS X အတွက်မောင်းနှင်မှုအားလုံးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏စက်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် configurations များကိုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Hackintosh အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကလိုအပ်သော .kext ဖိုင်များအတွက်အင်တာနက်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းအတွက်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
သင်လုပ်သမျှအားလုံးနှင့်အလွန်ဂရုစိုက်ရမည်။ တရား ၀ င်အထောက်အပံ့မရှိခြင်း၊ မည်သည့် software update ကိုမဆိုနှောင့်ယှက်နိုင်သည် .kext တစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Hackintosh ကိုအလုပ်မလုပ်ပါစေ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည့်အရာများကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုဖြစ်လာရင်ငါတို့မှာကွန်ပျူတာမရှိဘဲကျန်ရှိနေသေးတယ်၊ နောက်တစ်ခုမရှိရင်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့၊ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှာရမယ်၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ၊ အရာအားလုံးကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးအဲဒီ update ကိုမသွင်းရဘူး။
အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထည့်သွင်းတယ်ဆိုတာမသိရင် Hackintosh ဟာအလုပ်ကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်။
ဘဝမှာအရာအားလုံးလိုပဲ မှီခို။ ငါအရင်ကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းငါ Snow Leopard ကို AAO D250 ကိုသုံးခဲ့တယ်။ သူက applications တော်တော်များများနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းကိုငါဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဲဒီကွန်ပြူတာက ၁၀.၁ me ရှိပြီး€ 10.1 ထက်မနည်းပါဘူး။ ၎င်းသည် iMovie, Tweetbot နှင့် Apple ၏မူလအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်ဟုသင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာငါ့ကိုပိုက်ဆံတစ်တန်ချွေတာကြလိမ့်မယ်။
ငါကွန်ပျူတာနှင့်ပြုသကဲ့သို့တူညီသောအခြားသဟဇာတကွန်ပျူတာနှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့် SSD disk တစ်ခုထည့်ပြီးယူရို ၄၀၀ ကိုဝယ်ပါ။ RAM ကို 400GB အထိတိုးပါ ယူရို ၆၀၀ လောက်အမြတ်ရတယ်.
ပြဿနာ? ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲထားခဲ့ပါ အချို့သောမမြင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာနှင့်အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်သုံးနိုင်သောအခြားတစ်ခုမရှိပါကပြmainနာကရှင်းနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကကွန်ပျူတာသည်ရပ်တန့်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာသောအခါအရာရာကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်အချိန်ဖြုန်းတီးပါကအန္တရာယ်ရှိသည်။ ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာ USB အဆင်သင့်ရှိပြီးအဲဒါကိုတပ်ဆင်ဖို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအတိအကျသိတယ်။
ဒါကြောင့် Hackinosh ဟာ Mac နဲ့ဈေးအတူတူထွက်လာသလား။
ငါပြောမယ် အဘယ်သူမျှမ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သုံးစွဲသောအရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော် OS X ပါသည့်လက်တော့ပ်တစ်ခုရှိနိုင်သည် ပိုက်ဆံအများကြီးလျော့နည်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းဘယ်လိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိရင်
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ရှိသည် Mac Pro။ လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားညီတူညီမျှအစွမ်းထက်သောကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ရန်ပြောခဲ့သည် ကျနော်တို့ကပိုသုံးဖြုန်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် Mac Pro ကတန်ဖိုးရှိတာမို့ဒီထက်ပိုပြီးမဈေးအတူတူဘဲထွက်မလာပါဘူး။
ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာအားလုံးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေလျှင်သင်ခုန်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်မဟုတ်ပါကသင်ကွန်ပျူတာဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပြီးသင်ကြိုးစားရန်မကြောက်လျှင်သင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနိုင်သည်။ ငါဒီတစ်ခါတော့ 64-bit ပေါ့။ သင်လည်းတက်နိုင်မလား?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » Hackintosh သည် Mac နှင့်စျေးနှုန်းတူသလား။
မျက်နှာသာ… psystar OSX86 မြင်ကွင်းကို "ကိုယ်ပိုင်" မထားကြစို့နှင့်အလွန်ရုပ်ဆိုးသောအရာဖြစ်သည်။
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများနှင့်အညီ Semi-in တစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးနှင့်ထိရောက်သော hackintosh ကိုဖန်တီးနိုင်သည့်စျေးသိပ်မကြီးသည့် hardware အပိုင်းများစွာရှိသည်။
E86 "cheater" နှင့် dar2002b.ldr ကို အခြေခံ၍ EFI သည် mac အားထောက်ပံ့သောတကယ့် "အလွှာ" မရှိဘဲဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်မိုက်ကရိုကိုသွန်းသောရွှေနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Motherboard စီတန်းထားသည့်တိုင်မည်သည့်အရည်အချင်းကိုမဆိုလုပ်နိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်သံသယများစွာရှိသည်။ ချည်ငွေ sequins နှင့်အတူပါရှားကော်ဇော၏။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မကြာခင်မှာစျေးကွက်ထဲမှာ EFI အစစ်အမှန်ရှိတဲ့ Tank တွေကိုစျေးကောင်းကောင်းနဲ့မြင်ရတော့မှာပါ။ ၎င်းတို့ကိုတီထွင်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ EFI သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၏တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာပြီးပြီ…သင်ကအချိန်ပေးသည်။
ဟားဟားဟားဟား။ မင်းကယုန်တစ်ကောင်အတွက်ဝက်ကိုရောင်းလိုက်ရင်မင်းဟာထူးခြားတယ်ဆိုတာကို Mac လူမျိုးတွေကိုယုံလိုက်တာကမင်းကိုရယ်လိုက်တာ။
မင်းရဲ့ Hackintosh ကောင်းလား
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် core2quad q6600 ကိုရရှိသော kingston ram2gb, gigabyte normal board နှင့် nvidia 8600gt 512 ddr2 ပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့ပြီးသွားသည်။ ပြproblemနာမဟုတ်ပါ efw၊ ကျွန်ုပ် firewire 400 ကိုထည့်သောကဒ်ကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်
leopard 10.5.4 သည်ဤ no-nonsense app များနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်သည် -
protools le 7.4 (mbox 1), win နှင့် program များနှင့်ဂိမ်းများကိုအသုံးပြုရန် vmware, အကြောင်းပြချက် ၄၊ ableton live, propellerheads recycle ။
photoshop cs3, indesign, quarkxpress, Illustrator, freehand, flash … ..
အားလုံးမတော်တဆမှုများနှင့် ၁၀၀% အလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်သင် hackintosh သည်အလုပ်မလုပ်ဟုသင်ဆိုသောသူများကိုပြင်ဆင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဘဝကိုရှာဖွေပြီးလိုက်ဖက်သည့်အရာများကိုရှာပါကကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာရန် ၂ နှစ်ကြာခဲ့ပြီး၊ 100″ မျက်နှာပြင်နှင့်ပတ်သက်။2အကြောင်းကို ... ။
စကားမစပ်ငါဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းသင်တန်းလုပ်နေတယ်နှင့်ငါ့ hack ငါ၏အအတန်းအစား၏ imac dual core 2.4 ကို polishing ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြေရှင်းပေးရန်! ကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် hack !!
jaca101 သင် retintin နှင့်အတူမေးခွန်းများကိုမေးပါသလား? မင်းကနောက်တာလား သို့မဟုတ်သင်ဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်။ အလေးအနက်ရှိပါသလား မိုက်ကရိုဖုန်းပေါ်တွင်သင်ထားသည့်အပူအရှိန်အရဆူညံသံကလုပ်လိမ့်မည်။
တစ် ဦး က Hack သည်တစ် ဦး MAC အဖြစ်ထိုက်သည်မဟုတ်နည်းလမ်း !!!!!
MENUDE BARBARITY !!!
ငါ၏အ 2.4 ကို dual core လူတန်းစား၏ imac ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လောက်တန်သည်။ ကျွန်ုပ် hack သည် 1000 ထက်နည်းသည်
hack က Mac နဲ့အတူတူလား။
> jaca101 သင် retintin နှင့်အတူမေးခွန်းများကိုမေး?
> ဆူညံသံသည်မိုက်ကရိုဖုန်းပေါ်တွင်သင်ထားသည့်အပူအရှိန်နှင့်အညီပြုလုပ်လိမ့်မည် ...
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာကောင်းမွန်တဲ့ heatsink တစ်ခု၊ fan ကောင်းတစ်လုံးနဲ့ box တစ်ခုတပ်ဆင်ထားလို့ပါ။
အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လမ်းပေါ်ကပထမတန်းစားအစိတ်အပိုင်းများထက် Apple ကနေပထမတန်းစားအစိတ်အပိုင်းများကို iMac ပုံစံနဲ့လက်တဆုပ်စာ ၀ ယ်တာဟာစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ပြောတာပါ။ နောက်တစ်ခုကဒုတိယတန်း၊ တတိယတန်းအတန်းရှိသင်တင့်ကားတစ်စင်းထူထောင်ပြီးပြီ။ သင်မသိဘူး။
ကောင်းကောင်း update လုပ်ပါသလား? <<< တောက်ပမှုနှင့်အတူမသွားဘူး, သိချင်စိတ်ပါပဲ
Hahahahaha ... တိတွေအများကြီးမတိ။ မင်း Mac ကိုကြိုက်တယ်၊
ကျွန်ုပ်၏ Hackintosh သည် SHOT ကဲ့သို့သွားသည်။ ဘာမျှမအောင်မြင်ပါ (မျှမျှတတပြောရလျှင်၊ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ ဝိုင်ဖိုင်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းမှပြန်လာခြင်း၊ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ၆၈ ကုန်ကျသည်) Mac Pro ထက်% လျော့နည်းပါတယ်။
မှတ်တမ်းအတွက်တော့သူတို့ဟာတော်တော်လေးသဘောကျပုံရတယ်။ ဒါပေမယ့် hackintosh ပါတဲ့စိတ်ကြိုက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်တာဟာကြီးမားပြီးအောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ငါဂိမ်းကစားချင်တဲ့အခါ, ငါ Windows ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့် 9800GT ဗီဒီယိုကဒ်သားရဲ၏ခံစားဖို့ပဲ။
စကားမစပ်, ဆူညံသံပရိတ်သတ်တွေအဘို့, သင်အမြဲတမ်းအရည်အအေးကိုသုံးနိုင်သည်, ထိုသို့အလွန် (အလွန်) တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြည့်လိုက်တော့ငါ hackintosh ကိုယူရို ၆၀၀ လောက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ဖန်တီးခဲ့တယ်။ ငါပြောတာကပန်းသီးထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်
အဲဒီ HackPros ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရင်နှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာမင်းငါ့ကိုပြောမလား။ acrimony မရှိဘဲ။ ငါသူတို့တက်ကိုင်လျှင်သိရန်လိုသည် ...
ကောင်းပြီ၊ ငါသိသည့်တစ်ခုတည်းမှာကျွန်ုပ်မှာယူကရိန်း ၅၀၀ အတွက် hackkintosh ရှိတယ်၊ အဲ့တာကငါ့ရဲ့ Mac ထက်အများကြီးစောသည်။
ကျွန်တော့် hack မှာ Intel Core Quad 2.6gh ပါဝင်သည်။4gb of gigabit board တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် i mac ထက်အများကြီးသာလွန်သောကြောင့်ထိုက်တန်သည်။
post ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးသင့်တယ်။ တတိယပါတီအစိတ်အပိုင်းတွေကမြင်နိုင်တဲ့အမှားတွေအပြင်ရေရှည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြcauseနာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပါ။
နှစ်နှစ်အကြာမှာဒီအင်အားကြီးတဲ့ hackpros တွေဟာဒီနေ့ခေတ်မှာအလုပ်လုပ်နေလားမလုပ်ချင်ဘူးလို့ငါပြောခဲ့တယ်။
သင်၏ hackintosh တွင်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆင်ရေးကိုစမ်းသပ်လိုသည်။ ၎င်းကိုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသတ္တုတွင်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ငါ့ hackintosh သယ်ဆောင်သောကွောငျ့
ONE GIGABYTE ဘုတ်: GA-EP35-DS4
ပရိုဆက်ဆာ: INTEL CORE Quad 2.4GHz
ဂရပ်ဖစ်ကဒ်: nVidia GeForce 8600 GT 512 MB DDR3
RAM ကိုမှတ်ဉာဏ်:2*2GB
Hard disk များ - ၂ * ၅၀၀ GB (ငါအရမ်းကောင်းတယ်။ ) xD
ပြီးတော့ငါဘာမှမကျန်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဒါပေမဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်နဲ့အတူငါတကယ်ကိုလုပ်ဖို့တကယ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့ PRDENATOR ကိုသင်ရရှိမှာပါ။
အဆိုပါ Corb ဟုသူကပြောသည်
အဲလ်ဘတ်တို၊ မေးခွန်းအချို့၊ သူတို့ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်သင်ဖြေဆိုနိုင်သလား။
El Corb အားပြန်ကြားပါ
hackintosh မည်သို့သွားမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်အခြားတစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ powermac G5 သည်ယူရို ၂၄၀၀ ၏လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်မပြည့်ခင်နှင့်အဆိုးဆုံးမှာအလားတူရောဂါလက္ခဏာများစွာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ရပ်များရှိနေကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ Mac ပန်ကာ, ငါ၌အသစ်စက်စက် macbook လိုလားသူရှိသည် ..
ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့ငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာအသစ်ဟာ hackintosh ကိုလုပ်တော့မယ်၊ ငါ osx မရှိလို့မဖြစ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ၄ နှစ်တုန်းကယူရို ၃၀၀၀ သုံးတော့မယ်။
Power Mac G5 လေးနှစ်သာကြာသည်ကိုပုံမှန်တွေ့မြင်ရသည်မှာ ၄ င်းသည်ပြတ်တောက်နေသည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာပါသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးက Motherboard ကမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ် ...
စင်စစ်၎င်းသည်ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ဦး စွာစစ်ဆေးပါ
သင်ပြောဖို့ကြိုးစားနေတာက hackintosh အဖွဲ့ပါ။
« INTEL Mainboard
၂.၄ Core2Duo ပရိုဆက်ဆာ
Kingston RAM ကို2GB ကိုနှင့်
NVidia GeForce 8600 GT 512MB DDR3 ဗွီဒီယိုကဒ်
သုံးနှစ်အတွင်းအလုပ်မလုပ်တော့ပါ ... ??? »
Leopard xxx, kalyway, uphuck, 10.5.x ပါသောကောင်းစွာလက်နက်ရှိသော hackintosh ကွန်ပျူတာသည်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်မူလ Mac ကွန်ပျူတာနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ hackintosh ကွန်ပျူတာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဟာအရင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုနဲ့မူလ Mac ကတူညီတဲ့အခြေအနေမျိုးဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
တစ် ဦး MAC WAN နှင့်ပိုက်ဆံသွားသူ http://www.apple.com နှင့်သင့်အနီးဆုံးဖြန့်ဖြူးရှာ ...
တစ် ဦး MAC WAN နှင့်ဘယ်သူမျှမသွားသူတစ် ဦး http://www.mercadolibre.com သင်၏အိတ်ကပ်နှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်ရှာဖွေချင်သော hackintosh ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုရှာဖွေပါ။
« INTEL DG31PR Mainboard
Leopard kaly way 10.5.2 ပါ ၀ င်သည့်လက်နက်ကောင်း hackintosh အဖွဲ့သည်မူရင်း Mac ကဲ့သို့စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
MAC ကိုလိုလားသူ၊ ပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူသည် mercadolibre.com သို့သွားပြီးသင်၏အိတ်ကပ်နှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်မည့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်သင်ထည့်ချင်သော hackintosh ဖြန့်ဖြူးသူကိုရှာဖွေသည်။ !!!
သင်ပြောသော configuration အားလုံးသည်1ª, 2ª (value) နှင့်3ª (value RASPAO) အမျိုးအစားများတွင်2ª…နှင့် hard disk မှသာတည်ရှိပြီး motherboard မှလွဲ၍ တည်ရှိသည်။ ငါ Western Union, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိမ်လည်သူများအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သောတံခါးပေါက်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင် hard drive များပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ခဲ့ပါ။
Western Digital ကိုဆိုလိုတာလား။ ဤကိစ္စတွင်မည်သည့်စွမ်းရည်ပင်ရှိပါက caviar သည်ပထမဖြစ်သည်။
အိုကေ, ငါမှားခဲ့ပါတယ်, ငါဝန်ခံပေမယ့် HD ကိုအတွက်
ဒီလက္ခဏာတွေအဖွဲ့က ၃ နှစ်အတွင်းအသုံးမ ၀ င်ဘူးလို့ထင်လား။ ???
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင်ဟာစာမျက်နှာကိုပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယတန်းမှနည်းပညာဆိုင်ရာမှတ်ချက်များဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။ သို့သော်အပြီးသတ်အားဖြင့်လက်နက်ကောင်းသည့် hackintosh သည်အသုံးပြုမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုနှိပ်စက်လိမ့်မည်။ ငါသာ HD ကိုထည့်ချင်လျှင်အဆင်ပြေသည့်နေရာတွင်သာ ၀ ယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် APPOLS MONOPOLY Apple သို့သွားစရာမလိုဘဲတူညီသောနည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် ...
ငွေရှာမယ့်သူတစ် ဦး က MAC ဝယ်ယူရန်
HACKINTOSH ဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသူတစ် ဦး ... !!!
ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး ... ။ ???
သင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်နည်းနှစ်ခုနှင့်အညီဒါပေမယ့်ငါဒီမှာတင်ခဲ့သောမူလ post ကိုအညီအစိတ်အပိုင်းများတန်းတူရေးနှင့်ပတ်သက်။ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မည်သူမဆို Mac ဝယ်ရန်ငွေရှိသူ
မည်သူမဆို Hackintosh ကိုလုပ်ရမည်
netbook ဝယ်ပြီး Linux ကိုထည့်လိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေအကြောင်းမသိသူမည်သူမဆိုသည်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကွန်ပျူတာကိုမုန်းတီးပြီးရေရှည်မှာပိုက်ဆံစုဆောင်းသွားလိမ့်မည်။
၁.- အခြေခံ၍ (စိတ်ချရသောဆာဗာဟုခေါ်သည့်) ဆာဗာသည် Mac ထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ စျေးကြီးရသနည်း။ ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကောင်းတောင်မှမရှိဘူး။
၂.- ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဒေတာစင်တာများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် Clone ကွန်ပျူတာများအစားစျေးနှုန်းချိုသာသော dedicated server အစီအစဉ်များကို Mac minis များအဘယ်ကြောင့်ပိုမိုများပြားလာသနည်း။ သူတို့နေရာထိုင်ခင်းကြောင့်လား။ ဟုတ်တယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, အာကာသနှင့်ထိန်သိမ်းအအေးနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်သည်။
နှင့်ငါဖြေ: ငါသုံးနှစ်အတွင်း၌သင်တို့ကို Hackintosh ယခုဖြစ်သကဲ့သို့အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုသံသယ။
abid farid ဆေးလ်ဗား ဟုသူကပြောသည်
ပန်းသီးအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအကြောင်းကိုမင်းပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တွင် Macs ၄ လုံးနှင့်ကွဲပြားသောလေးနက်သောပြproblemsနာများရှိသည့် ၈၁၀၀ ရှိပြီးကလေးငယ် ၇၃၀၀ သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောဘေးကင်းသော SCSI disk နှင့်အတူမိခင်အားမပျက်စီးနိုင်သော (နောက်ပိုင်းတွင်မကြာခဏပြproblemနာရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်) G4 မိခင်တွင်ပြitနာများရှိနေပြီးနောက်နှစ်ပြီးနောက်ဖြစ်သောကြောင့်အာမခံချက်မရှိချေ။ နောက်ဆုံးတွင်အရင်းအမြစ်ပြproblemsနာများ၊ စျေးကြီးပြီးရလဒ်မရသည့် iMac Indigo DV8100 နှင့်စီဒီဖွင့်စက်လည်းပျက်စီးသွားသည် (၎င်းသည်ပေါ်ထွက်လာပြီးကတည်းကငါသိခဲ့သော mac အားလုံးတွင်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီ) ယခုပန်းသီးပြက်လုံးသည် LCD မော်နီတာများတွင်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးအာဂျင်တီးနားမှာဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူး။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဘယ်မှာလဲ။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကိုဘယ်မှာစောင့်ရှောက်မလဲ အမှတ်တံဆိပ်အတွက်စောင့်ရှောက်မှုဘယ်မှာလဲ? အာဂျင်တီးနားအတွက်ပန်းသီးယူတာပဲ။
OSX က OS ကိုငါကြိုက်နှစ်သက်သော operating system တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသာအသုံးပြုသည်။
နောက်အချက်တစ်ခုကတော့ Mac ကစျေးကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်လက်နက်ကောင်းမျိုးပွားတွေထက်အများကြီးပိုတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီစျေးကွက်ဟာ hackintosh နေရာအနှံ့မှာပေါက်နေတဲ့ဒီစျေးကွက်နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
farid silva aboid မှစာပြန်ရန်
ကျွန်ုပ်တွင် OSX 10.5.5 ပါ ၀ င်သော Toshiba laptop၊ အဆင့်မြှင့် တင်၍ ၁၀၀% အလုပ်လုပ်၊ Photoshop, Premiere, Vmware နှင့်ပုံမှန်အခြေခံ application များဖြစ်သော Word, iTunes, aMSN နှင့်စသည်တို့ရှိသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ laptop ကယူရို ၇၀၀ လောက်တန်တယ်။ အခုအများကြီးပိုနည်းတယ်။ ဈေးကယူရို ၁၀၀၀ (သို့) အဲဒီထက်ပိုတဲ့ဈေးအပေါဆုံး macintosh ထက် hardware ပိုကောင်းနေတုန်းပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းရှာရန်နှင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်ဒရိုင်ဘာများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်များစွာယူခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် OSX မှကျွန်ုပ်အဘယ်အရာသင်ယူခဲ့သနည်း။ ဒါကလည်းအရမ်းများလွန်းတယ်
သတင်းကောင်း။ ကျွန်ုပ်၌ PPC စီးရီးမှ iMac G5 နှင့်အတူသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသည်။ သူ၌ကျော်ကြားသော pixel အားနည်းချက်ကို lcd ၌တွေ့နိုင်သည်။ သူသည် Alfa Uno (Buenos Aires ရှိ mac အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး) ၏လူများနှင့် ဆက်သွယ်၍ သူ၏စက်သည်အမှတ်စဉ်နံပါတ်များအကြာတွင်ရှိလျှင်၊ သူသည်အမှားမကင်းဘဲပြန်လည်ပြုပြင်လိမ့်မည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
farid silva aboid: ၎င်းသည်ရာထူးအတွက် Offtopic ဖြစ်သော်လည်းအလွန်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနားရှိအက်ပဲလ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းဆိုးများကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်နေရသည်။ ဒါကိုအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာလားဆိုတာကြည့်ရအောင်၊ သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့အပြုအမူကိုစလုပ်လာပြီလား၊ အက်ပဲလ်ကဖြန့်ချိသူတွေဆီကအရာရာကိုသူ့နေရာနဲ့သူနေရာချထားမယ်ထင်တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှစ၍ Mac အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် Mac ကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉ နှစ်တာကာလအတွင်း၊ SE (Quadra 1990 (19 Mhz) SE2 (7,8 Mhz) ဖြစ်သည့် SE30 (16MHz) သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ Mhz)၊ Ci (950 Mhz) (motorola) 33 Power 25/1 (ppc series ၏ပထမဆုံး)၊ 8100 power 80, 1 Processor ၏ 9600 G-1,4G-1 1p,4G-2 (ppc) ) 1 Imac 5″ (Intel) ။
ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားခဲ့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စက်တွေကိုအမြဲ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ သူမဖြည်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲသူတို့နဲ့အတူအလုပ်ပြီးအမြတ်အစွန်းတွေရတယ်။
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကကွန်ပျူတာတွေထက်အမြဲတမ်းစျေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့အရမ်းများလွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော့်ကိုအမြဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါသူတို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသောပီတာတိုင်း, မတိုင်မီနှင့်ယခုယူရိုတိုင်းအမြတ်အစွန်းရစေပြီ။
ငါသည်လည်း Macintosh ကဲ့သို့ငါ့အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရန်အာမခံထားသော hackintosh ကိုလည်းဝယ်လိုက်သည်။
Macs ကို ၀ ယ်တဲ့သူတွေကမာနထောင်လွှားတာ၊ မဖြုန်းတီးဘူး။ ကောင်းသောအရာကိုမသိသောမြည်း၌မိုက်မဲသူအချို့မဟုတ်ပါ။
Apple ကဒီနေ့ငါ့ကိုစျေးကြီးပေမယ့်သက်သေပြစက်ကိုပေးသည်။ အခုအချိန်မှာတော့ငါဟာ Apple ကိုဆက်ပြီး ၀ ယ်မှာပါ။ အဲဒီထပ်တူအာမခံချက်တွေအတိုင်းတန်းတူညီမျှညီမျှပြီးပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ထပ်တူထပ်မျှခိုင်မာသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုမတွေ့မချင်း၊ ၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်“ အတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာနှင့် McGyver” မလိုအပ်ပါ။ ငါနေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ Apple စင်တာတစ်ခုခုကို။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်၌ရေခဲသေတ္တာထဲ၌ Windows XP ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အလွန်ကောင်းသည်။ ထို့အပြင် Windows Vista ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မလိုဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ။ သူ။ ။ ။
အခုတော့အလေးအနက်ထား။ ။ ငါ bmw 124 စီးရီးအင်ဂျင်ကိုကျွန်ုပ်၏အံ့သြဖွယ်ထိုင်ခုံ ၁၂၄ တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အပြည့်အဝအခိုးအငွေ့ဖြင့်အလွန်ကောင်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ငါစီးရီး ၃ shock absorbers သို့မဟုတ်အလားတူကိုထည့်လိုက်လျှင်၎င်းသည်တည်ငြိမ်လိမ့်မည်။ တာယာများ၊ လိပ်စာစသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်မှာထိုင်ခုံ ၁၂၄ ၏ကူရှင်ချုပ်ခြင်းနှင့်အတူစီးရီး ၃ နီးပါးရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလွန်စီးနင်းပြီးစီးနင်းနိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်စူပါတည်ငြိမ်လိမ့်မည်။ ။ ငါယူတဲ့နေရာ၊ ထိုင်ခုံ (သို့) BMW တစ်ခုခုပြောင်းပါ။ ။ ။
ဒီ hackintos မှာလည်းအလားတူအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အရမ်းကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်နှစ်ငါဂရပ်ဖစ်ကိုပြောင်းရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၎င်းသည်အရှိန်မြင့်လာသည်။ အတူတူဒါမှမဟုတ်စနစ်ငရဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ။ ။
ပြီးတော့ဘယ်သူမှမှတ်ချက်မပေးခဲ့ဘူး။ ။ ။ Snow Leopard ထွက်လာတဲ့အခါ။ မည်သူမဆို Hackintos ရှိသူသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိအလုပ်အားလုံးကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အခြေအနေတွင်တိတ်တဆိတ်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ။ လုံခြုံလား။ ။ ။
ငါ့အလုပ်ကိုငါမစွန့်စားဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါ့မှာ Mac Pro 8 core ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒါကိုအိမ်မှာရှုပ်ထွေးစေပြီး MacOs တွေဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာသိချင်ရင်ငါ hackintosh ရှိတယ်။ ။ ဒါပေမယ့်မင်းကအစာစားတာနဲ့မကစားဘူး
အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။ ။ Josemacpro ။
နောက်ဆုံးတော့!! ငါမက္ကာရို, သင်မပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ ငါဒီမှာတစ်ကိုယ်တည်းခံစားရတယ် ...
ကောင်းပြီ၊ မင်းငါ့ကိုဘာပြောစေချင်တာလဲ။ ကျွန်ုပ်တွင်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က MacBook နက်ရှိခဲ့ပြီး၊ အခြားပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုက၎င်းတို့ကိုတစ်ဝက်၊ တစ်ဝက် - အာမခံထားသော်လည်းပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်။
အခုငါ့မှာ hackintosh ရှိနေပြီ။ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောဖြန့်ဝေမှုများစွာရှိသည်။ တကယ်တော့ငါ ၂၄″ iMac (သို့) Led Cinema Display ကိုငါတကယ်မျှော်လင့်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်…ငါကြည့်ရအောင်။ ငါကြိုက်တဲ့ iMac စျေးအတွက်ငါမှာ hackintosh နှစ်ခုရှိတယ်။ (အနည်းဆုံး) နှင့်ကောင်းသောသူမြား။ ပြီးတော့မှတ်တမ်းအတွက်တော့ငါ Mac (သို့) Leopard (Güindowsမတိုင်မီ) ကိုကူးပြောင်းလိုက်ပြီ။
ပြည်သူလူထု၏ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုကြောင့်သယ်ဆောင်သွားခြင်းမပြုရ။ Hackintosh ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။ အလွန်ကောင်းသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ Macs ဟာပိုသာတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ကြည့်ရှုပါ၊ သင်၏ကားထဲတွင်တစ်ခုခုပျက်စီးသွားသောအခါသင်ကားကို SEAT သို့မဟုတ် BMW သို့သွားရန်တွန့်ဆုတ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကား၏အင်ဂျင်တွင်အလုပ်လုပ်နေပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးကံကြမ္မာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ စက်တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအသိပညာသည် BMW သို့မဟုတ် SEAT သို့ပြေးလွှားရန်အလွန်အမင်းစိတ်မ ၀ င်စားဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
PD.- မင်းရဲ့ကားကိုဒီကားအမျိုးအစားနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတစ်ခုခုပျက်စီးသွားတဲ့အခါဘယ်ကိုသွားရမှန်းမသိဘူး။ ???
ငါထင်တာတော့မင်းဟာမင်းရဲ့ကားနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်သိလိမ့်မယ်။ !!!
isသရေလအမျိုးကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့် hackintosh ကို:
-4 GB Ram Ram DDR2
-Asus 8600 GT ဂရပ်ဖစ်ကတ် (passive cooling)
အခြား PC များမှ "legacy" HD အချို့
ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောဖြန့်ဖြူးမှုမှာ iDeneb 10.5.5 (update လုပ်သည် 10.5.6) ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာတစ်ခုတည်းမရှိပါ။
ယခုကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာကိုတစ်နှစ်ကျော်တပ်ဆင်ပြီးကတည်းက Linux Motherboard အသစ်မှသင့်ကို ORIGINAL 10.5.6 ကို install လုပ်ရန်လက်ရှိ motherboards အသစ်ကခွင့်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ၎င်းကိုသူငယ်ချင်း၏ GigaByte GA-EP45-UD3R တွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးအသံ၊ Core Image နှင့် Quartz Extreme မှလွဲ၍ ၎င်းကို“ လက်ဖြင့်” ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည် (ထိုစကားမှာတပ်ဆင်ရန် ၂ မိနစ်ထက်မနည်းအချိန်ယူရသည်) မှန်ကန်သောယာဉ်မောင်းများ) သည်ကျက်သရေနှင့်ရိုက်ချက်တစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်သည် GigaByte2GT (passive ref) ဖြစ်သည်။
ငါ့မှာ imac g5 ရှိတယ်၊ ကြီးမားတဲ့အပိုင်းအစ၊ မော်နီတာကအလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် mini vga output (သို့) ခေါ်လိုက်တဲ့အရာကငါ့ကိုအပြင်ပန်းမျက်နှာပြင်မှာဗွီဒီယိုအမှားတွေပေးတယ်၊ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးက shit က ၅၀% ဖြစ်တယ်။ ငါ၏အ pc ၏ဒေါ်လာ 50 C400D26750 GB ram 2-monitor နှင့် Mac 22 သည် $ 17 နှင့်တူသောအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်၎င်းနှင့်တူသောအရာတစ်ခုကျွန်ုပ်၏ဘယ်လောက်ကုန်ကျမည်ကိုမမှတ်မိတော့ပါ၊ hardware ပိုင်းဆိုင်ရာကျရှုံးမှုတစ်ခါမျှမရရှိခဲ့ပါ။ XP ကို ​​sp1100 နှင့် Windows3ကိုအနိုင်ရ !!!! ကျွန်ုပ်၌ကွဲပြားသော disk များ၌ ၅၀၀GB မှတစ်ခုနှင့် ၇၅GBGB အသစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ (pc တွင် mac disk ပုံစံများပြုလုပ်ရန် 7GB disk တွင်လည်း hackintoch ရှိသည်။ ) ငါ mac သုံးရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကအမှိုက်သရိုက်မရောင်းချင်တဲ့အတွက်ကျန် Logic Pro ကိုငါစွန့်လွှတ်လိုက်လို့ပါ။ Mac သည်ဖက်ရှင်ကျပြီး၎င်း၏အဖြူရောင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းကိုရောင်းချသည်။ သို့သော်ထွက်ပေါ်လာသောအခါတွင် hardware သည်ခေတ်နောက်ကျသွားသည်။ AH! နှင့် quadro ကလွဲပြီးသူတို့၏ဗီဒီယိုကဒ်များအားလုံး !!!! မင်္ဂလာပါနှင့် mac မဝယ်ကြဘူး !!!!
Edwards ၃၃ ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကြည့်ပါ၊ ငါ hackintosh တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စဉ်းစားနေပါတယ်၊ အားကောင်းလောက်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် uphuck 10.4.9 နှင့်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ရှိသော hardware ကြောင့်၎င်းသည်မြန်ဆန်လွန်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီစာမျက်နှာကိုရှာရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့အကြောင်းအရင်းက MacPro ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့စက်ရှိဖို့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုငါရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအလုပ်မှာငါသုံးတဲ့စက်၊ ငါဒီဇိုင်းဆွဲတယ်၊ ငါလိုစက်မျိုးလိုချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အိမ်မှာငါမူရင်း Mac ဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိဘူး။ ငါသည်ဤပြwithနာနှင့်သင်၏အကူအညီကိုကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ် ... အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ hack system ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ အားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောနိုင်မယ်ဆိုရင် hardware နဲ့ဆိတ်ကွယ်ရာတစ်ခုခုကိုငါမေ့သွားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာဗီဒီယိုနှင့်အသံနှင့်ပြproblemsနာတွေရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ငါမင်းဆိုးဝါးတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရေးမယ်ဆိုရင်မင်းသိလိမ့်မယ်လို့မင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်စတင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလေ့လာချင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ... ကျေးဇူးပါ
ဒီတစ်ခါလည်း site ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေဤသည်မဟုတ်ပေမယ့် insannelymac.com
Hehehe ... အဆုံးမှာတော့မေးခွန်းက to စစ်တိုက်ဖို့ပဲ
Mac ဆိုလျှင်၊ hack လျှင်ကော ...
တစ်စုံတစ် ဦး ကFerránAdriàမှအိမ်တွင် El Bulli ၌ပေးသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
အိမ်တွင်တစ်ယောက်ယောက်သည်ဤချက်ပြုတ်နည်းများကို (သို့မဟုတ်သင့်အရသာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်) တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါသလား။
ထို့အပြင် အကယ်၍ သင်သည်FerránAdrià (သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခု) ကိုအိမ်တွင်ချက်ပြုတ်လျှင်သင်အိမ်၌ချက်ပြုတ်လျှင်သင်၏အဆင့်နှင့်ချက်ပြုတ်မှုဗဟုသုတသည်စာရွက်၏အခက်အခဲနှင့်အချိုးအစားပိုမိုမြင့်မားလာလိမ့်မည်။
သို့သော် (အမြဲတမ်းရှိသောကြောင့်) ၎င်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ နည်းစနစ်များ၊ အသုံးအဆောင်များကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဆိုလိုသည်။ ဤသုတေသနတွင်အချိန်နှင့်ငွေကြေးထည့်ဝင်ခြင်းပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့်အယ်လ်ဘူလီတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Apple ရှိနေတာပဲ။
သေချာပေါက်ကောင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်ထားသည့် hack သည် Mac ကဲ့သို့တူညီသောသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ အတူတူသို့မဟုတ်ကြာရှည်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ပျော်ရွှင်သောပိုင်ရှင်သည်သူတည်ဆောက်ခဲ့သောစက်သည်“ ဤလက်များနှင့်” အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ရတာဂုဏ်ယူပါလိမ့်မည်။ ထိုထက်နည်းသည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစက်ဟာနာရီပေါင်းများစွာ googling၊ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာမျက်နှာများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ "ငါဘာမှနားမလည်ဘူး" နဲ့စမ်းသပ်မှုနဲ့အမှားတွေနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်နိဂုံးဖြစ်ပါတယ်။
အစွမ်းထက်သော hack ပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်ဂုဏ်ပြုပါသည်။ သင်ထိုက်တန်ပါတယ်
ငါရိုးရှင်းစွာအနေဖြင့်အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်သင်ကြည့်သည့်ပုံစံပေါ် မူတည်၍) များစွာပေးဆပ်လိုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်သည့်အခြားအရာများ၌ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်မော်ဒယ်များ၊ သဟဇာတဖြစ်မှု၊ ဗားရှင်းစသည်တို့ကိုမစိုးရိမ်ပါ။
ငါက box ထဲကထဲကဖွင့်, သူကအလုပ်ဖြစ်တယ်။
အတူတူလုပ်ဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခု။ နှစ် ဦး စလုံးလေးစားဖွယ်။ နှစ် ဦး စလုံး meritorious ။ ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များနှင့်အတူအသီးအသီး။
ပြီးတော့သူတို့တစ် ဦး စီကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ကြပါစို့။ 🙂
PS: များသောအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်သူ၏လမ်းခရီးကိုမကြာခဏသွားလေ့ရှိပြီး၊
လိမ္မာပါးနပ်စွာဖြင့် ... ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ချဉ်းကပ်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါ့ကိုကောင်းတဲ့ hack တစ်ခုအတွက်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဘယ်သူထောက်ခံသလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ရွေးချယ်စရာတွေကိုဖတ်တယ်၊ တချို့ကငါ့ကိုဒါမှမဟုတ်ပိုတိကျတဲ့တစ်ခုပေးတယ်။
Mac သည် PC နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ ငါ maqueros အတော်လေးဝေဖန်မီ, ငါနေ့တိုင်းတခုတခုအပေါ်မှာကြိုးစားနိုင်ခဲ့သည်သည်အထိ။ အနည်းဆုံးတော့အခု PC ပြန်မသွားတော့ဘူး။
hackintosh တစ်ခုတပ်မည်လား။ ကောင်းပြီ၊ လုံးဝတည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုစနစ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုမည်သူသိသည်၊ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုလက်ခံမလားမသိ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်နှင့်အဆင်ပြေမည်မသေချာကြောင်းစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သူကငါ့အသံကဒ်နဲ့အဆင်ပြေမယ်မသွားဘူးလားမသိဘူး ...
ပိုကောင်းတဲ့အရာအားလုံးတပ်ဆင်ပြီးအလုပ်လုပ်။ ၏သင်တန်း, အရောင်များကိုမြည်းစမ်းဖို့။ ကျွန်တော်နှစ်သက်တာကတော့လူတိုင်းကသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်။ သူတို့သာကျေနပ်ပြီဆိုရင်ဆက်လုပ်ပါ။
IBAN ကုဒ်ကို ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ compaq nw8000 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်အားတစ်စုံတစ် ဦး ကပြောပြနိုင်ပါသလား။ ငါအလုပ်လုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုက 10.4.5 ပါ။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံး ၁၀.၄.၉ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးပါ။ ဗားရှင်းတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ma နဲ့မစတင်နိုင်ခဲ့ အဆိုပါ 10.4.9 နှင့်အတူ ke: C
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ quad pc ရှိသည်။ ဤသည်မှာဇိမ်ကျ။ ipc 10.5.6 ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တပ်ခဲ့သည်။ အတွက် အဲဒါကြီးရင်ကောင်းမယ်၊ ငါမှာ p5kpl-am board နဲ့ nvidia gt9400 ဂရပ်ဖစ်တွေရှိတယ်။
အကယ်၍ ငါ့ကိုကူညီမယ်ဆိုရင် compaq laptop နဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲဒါကိုသဘောကျလိမ့်မယ်။
မိုက်ခရိုသည်ကျားသစ်တစ်ကောင်နှင့်အရူးမပြုလုပ်သောကြောင့် osx နှင့်ယှဉ်လျှင် ubuntu linux နှင့် ပို၍ ကောင်းမွန်စွာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
OSX သည်ပေါ့ပါးသောစနစ်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအလွန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်များစွာပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သံလိုအပ်သည်၊ ၎င်း laptop သည်နည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားပြီ။
မင်္ဂလာပါ။ အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ Leopard နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ လမ်းမရှိဘူး၊ နောက်ဆုံးမှာငါနောက်ဆုံးထုတ် tiger version 10.4.11 ကို install လုပ်နိုင်ပြီ၊ အမှန်တရားကအရမ်းကိုကောင်းတယ်၊ ကောင်းပြီဂရပ်ပါ။ quartzextreme ပါ ၀ င်သည်။ အသံသည်ကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်အင်တာနက်မသုံးသောကြောင့်ကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်မကြိုးစားခဲ့ပါ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သော်လည်းကျားနှင့်လည်းဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ ကတစ်ခုခုပေးလို့ကျားသစ်ကပိုတောင်းဆိုတယ်။
ကောင်းပြီ, ဒီမှာနှင့်ထိုအရပ်၌နှစ် ဦး စလုံးမှတ်ချက်များကိုဖတ်ပြီးနောက်, အသိအကျွမ်းမှလူသိများမဟုတ်နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်အချို့ထံမှအကြံပြုချက်များ, ငါမက်ဒရစ် - ဘာစီလိုနာနှင့် betis အချို့ကိုကြောင်းကောက်ချက်ချ။
အသံနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်စက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာပြင်ပအသံကဒ်၊ Midi ကီးဘုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်တေးဂီတကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်၎င်းနှင့်တိုက်ရိုက်လုပ်ခြင်းအားလုံးတို့သည်အလုပ်အစီအစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ keyboard တစ်ခုပါတဲ့ dj တစ်ယောက်ကိုသူမြင်တဲ့အခါသူရဲ့ပန်းသီးလေးထွန်းလိုက်ပြီဆိုတာပြနေတာပေါ့။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်ယူရို ၇၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသောစက်ကောင်းတစ်လုံးတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုဒေတာပေးပါ
ငါ pc ဝယ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီမှာအချိန်ကယူရို ၁၀၀၀ လောက်ဈေးကြီးတယ်၊ အခုတော့တစ်ဝက်၊ ၂.၃၃gh၊ ၄ သိုးရှိတယ်။ မျက်နှာပြင်အပြင်စုစုပေါင်းယူရို ၁၃၀၀ + ၈၈၀၀GT၊ , ဒါပေမယ့်ငါမှာပိုက်ဆံရှိခဲ့ပြီးငါကြောင် oooo_ooooamacbook pro 1000gh, 2,33 bu သိုးဖိုး4€ငါဝယ်သို့မဟုတ်ယခုသို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှတန်ဖိုးရှိ, အင်္ဂလိပ်တရားရုံးနှင့် uffff စောင့်ဆိုင်းတစ်လအိမ်ပြန် pa, အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါအာမခံသည် ငါ၏အ pc ထက်ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတူညီတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ, windos ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ကွင်း။
ငါကစားတော့မည်မဟုတ်၊ ကျားသစ်သည်ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်သွားသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် MAC PRO သို့မဟုတ် MAC Hack တစ်ခုကိုမရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်မဖျားတော့ပါ။
ပန်းသီးလိုဂိုဆိုတာဘာလဲ? ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သေချာသည် Eva ကိုက်သောပန်းသီးကိုစဉ်းစားပါ။ သင့်လက်၌ထိုအရာရှိပါကသင်ရှုံးသည်။ ငါပြတင်းပေါက်တွေ၊
ငါ့မှာလက်တော့ပ်နဲ့စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာအကြားအနည်းဆုံးကွန်ပျူတာ ၁၀ လုံးရှိတယ်၊ ငါ macbook pro ပဲသုံးတယ်။
ဒီခြိမ်းခြောက်မှုရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် hackintosh ဟာ imac နဲ့အတူတူကုန်ကျတယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်မမှန်ပါဘူး
ငါမှာ core2duo 2.54 GHZ,6GB RAM,2HD SATA 250 GB, nvidia Geforce 9600 GT 521 DDR3, Intel PD35DP, DVDRW-DL LG; အားလုံးသည်ဒေါ်လာ ၇၅၀ အောက် (viewonic 750 TFT 19x1680 မော်နီတာ + တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည့်အသံချဲ့စက် ၂ ခုအပါအ ၀ င်)
ကျွန်တော့်မှာ Windows XP နှင့် OSX Leopard 10.57 (IPC) လည်ပတ်နေပြီးအရာရာတိုင်းအဆင်ပြေစွာရှိနေသည်။ မည်သည့်ပြproblemနာမှမရှိဘဲဒီဇိုင်းဆိုင်ရာပရိုဂရမ်များဖြစ်သော Suite Adobe CS3 နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Call of duty4ကဲ့သို့သောဂိမ်းများကိုပင်ငါပြေးခဲ့ဖူးသည်။
သူတို့ကိုငါ macpro (Imac XD တောင်မပါ) နဲ့နှိုင်းယှဉ်တာကစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ထွက်လာတာပါ။
တစ်ခုမှာမှန်ကန်သည်။ hackintosh ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်ဟတ်ဝဲနှင့်ကိုက်ညီမှုနှင့်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ ငါအားလုံးအလုပ်လုပ်ရဖို့တပ်ဆင်ထား 10 မှတဆင့်သွားခဲ့ကြရတယ်။
ငါနောက်ပိုင်းတွင် MAC ကိုဝယ်ယူရန်မတားမြစ်ပါဘူးဒါပေမယ့် MAC hackintosh မှာအခြေခံအများကြီးမရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့တူညီတယ်။ ကောင်းပြီ, Pystar တစ်ခုနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးလက်ပ်တော့ပ်ဝယ်လိုက်သည်။ (HP DV72035ea)
ငါပထမဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားပြီး ideneb 10.5.5 ကို install လုပ်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘူး။
- ငါဂရပ်ဖစ်၏မောင်းနှင်မှုကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင် resolution 1024 သာရှိပြီး၎င်းကိုအလုပ်လုပ်ရန် patch (သို့) "kext" ကိုမည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကိုမသိပါ။ (ကဒ်သည် ATI RADEON HD 4530 ဖြစ်သည်)
- ၎င်းကိုခဏအသုံးပြုပြီးသောအခါ၊ ပြန်လည်စတင်ရန်လိုသည့်အခါ OS သည်ချိတ်ဆွဲထားခြင်းမရှိပါ။ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးမလားကြည့်ကြရအောင် ... ငါမှာနှိမ့်ချတဲ့ထုတ်လုပ်သူရှိတယ်၊ ငါနဲ့ငါ့အဖွဲ့ကိုပြောင်းတော့မယ်။ (ဒါမှမဟုတ် system - PC -> MAC အတွေးအခေါ်၊ အချိန်ကာလပဲ) ... တကယ်တော့ငါအရမ်းလိုအပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်အကိုင်အများစု (ဝါသနာအရမဟုတ်ဘဲ ၀ င်ငွေရသော) ဖြစ်သောကြောင့်အမှားအယွင်းများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုများနှင့်ပါဝါအများလိုအပ်သောပရိုဂရမ်များဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ HD ။
ဒီပရိုဂရမ်များနှင့် HD များ (Gigas အစား Teras လိုအရာနှင့်တကွ) နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့သောစက်တစ်လုံးလိုချင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်ပြgiveနာမျှမပေးနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို fucks လျှင်အမြန်ဆုံးလည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတောင်းတဲ့နေ့, ငါပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသောနေ့ရက်သည်) ။
ငါ MAC STORE တွင် MACPRO ၏အမြန်ပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောလက္ခဏာများကို cores ၈ ခု၊ ၁၆ လုံး၊ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကောင်း၊ hard disk နေရာများစွာစသည်တို့ကိုသိုလှောင်ထားသလောက်သတ်မှတ်ထားသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 €အဘို့အရာ။
အမှန်တရားကတော့အခုငါ့မှာပိုက်ဆံရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် (အခြားတစ်ဖက်မှာတော့အဲဒါကငါ့အလုပ်ပဲ။ ) ဒါပေမယ့် hackintosh တစ်ဝက်လောက်ထွက်လာရင်ငါဖမ်းနိုင်တယ် ငါသည်လည်းလိုအပ်သောအခြားပစ္စည်းကိရိယာများ။
ငါအရင်ကသတ်မှတ်ထားတာအားလုံးကိုသေချာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအင်္ဂါရပ်တွေကိုသင် hackintosh လုပ်လို့ရလား။
hackintosh သည် MAC ပါ ၀ င်သော်လည်း PC နှင့်ပတ်သက်သောမြည်းကိုပေးသည် (Soft and Hard ကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း)?
ပိုကောင်းသောစွန့်စားမှုနှင့်အခြားပိုမိုအလယ်တန်းလိုအပ်ချက်များကိုစွန့် pelas ဖြုန်း?
ကောင်းပြီ၊ ငါလိုလိုလိုငါ့ကိုအသိပေးပါ၊ ပြီးတော့မင်းရဲ့အဖြေတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Pd.- hackintosh သူတို့မငါ့ကိုပြုပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကငါ့ကိုပြုလိမ့်မယ်
Farid ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီစာမျက်နှာမှာကျွန်တော့်မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေတွေရှိတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအကျဉ်းချုပ်ပေးနိုင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါအောက်ပါဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်အတူ hack လက်နက်ပါပွီ
ဖြစ်ရပ်မှန် - Vitsuba VTB-8030 အနက်ရောင်
Mobo: Gigabyte Technology Co. , Ltd. EP35-DS3L
ဂရပ်ဖစ်: MSI nVidia GeForce 8500 GT 512Mb (CI / QE)
LAN: onh အလုပ်လုပ် withouth patch ကို
အသံ - လိုင်း၊ လိုင်း၊ နားကြပ်၊ ဒီဂျစ်တယ်
RAM ကို: 4GB Kingston 800Mhz
HD: SATA II ၏ Hitachi 400Gb ။ 16Mb ကြားခံ GPT (GUID)
DVD- PIONEER DVD-RW DVR-212D (SATA)
Mac OS X x2.0.11 (86-bit): 64 အတွက် Geekbench 5338
ငါလိုအပ်ချက်မရှိခြင်းများအတွက်နောက်ဆုံးဖြတ်ကိုမသုံးသော်လည်း, တစ်ချိန်က Premiere CS4 နှင့် iMovie ကဲ့သို့တပြိုင်နက်ပြproblemsနာမရှိဘဲပြေး
မင်္ဂလာပါ Farid …မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါပြောမယ်၊ ပြtheနာကငါကွန်ပျူတာကိုမတပ်ဆင်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ pive သည်၎င်းအားကျွန်ုပ်အားစုစည်းပေးပြီးကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အညီဖြစ်စေသည်။
ငါ MAC STORE သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်လိုအပ်မည်ဟုထင်သော MACPRO ပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (နောင်တွင်ကျွန်ုပ်ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်သည်ကိုသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနည်းငယ်ခုတ်ဖြတ်လိုက်သည်)
2.26GHz Quad-Core Intel Xeon နှစ်ခု
တစ်ခုမှာ 18x SuperDrive
Numeric Keypad (စပိန်) နှင့်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်ပါသော Apple Keyboard
Apple Mini DisplayPort သို့ VGA Adapter မှ
စုစုပေါင်း: € 3400
ကျွန်တော့်မေးခွန်းကဘယ်လို Hack လုပ်ရမလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့အပြင်ဒီဝိသေသလက္ခဏာများကိုသင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် (ဟုတ်ကဲ့ (သို့) မဟုတ်ပါကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်သည်) ... ဒါပေမယ့်ဒါကလွဲပြီးငါ့ကိုပြanyနာတစ်စုံတစ်ရာမပေးဘူးဆိုရင်၊ နူးညံ့ပြီး Hard နှစ်မျိုးလုံးပါ၊ သင်ဟာ MACPRO မပေးရလို့ပြproblemနာမရှိပါဘူး ...
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယိုပြonနာများနှင့်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အလုပ်လုပ်သည် (မိုက်ခရိုနှင့် motherboard အရခေတ်နောက်ကျသည်၊ သို့သော်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အရေးကြီးသော RAM များစွာဖြင့်) ကျွန်ုပ်သည်တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ခြင်းမပြုနိုင်သောကြောင့် HD၊ ဟုတ်ကဲ့ SD၊ ဒါပေမယ့်ပြန်ဖွင့်ချိန်အတွက်နာရီ၊ သုံးခုတခါတလေပျက်သွားတတ်တယ် (တစ်ခါတစ်ရံမှာပရိုဂရမ်၊ အခြားသူများက PC)၊ ငါပိုစတာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ A4 ထက်ပိုကြီးတဲ့ format နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ အလွှာများစွာရှိသည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအသုံးပြုနေသော After Effects themes များရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုအလွှာ ၃ ခုထက် ပို၍ ပေးသည့်အခါ၎င်းသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေ၊ အချို့သောသက်ရောက်မှုများ၊ ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အဆုံးမဲ့ပြန်ဆိုခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင် frame တစ်ခုပေါ်လာသည်မှာ ငါခဏတာ ... အချုပ်အားဖြင့်ငါအဖွဲ့များကိုပြောင်းလဲရန်ရှိသည်။ ထိုအရပ်မှကျွန်ုပ်၏အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးသော MAC သို့ပြောင်းသည်။
ဒါပေမယ့်သူက HAC ကိုစျေးနှုန်းရဲ့တစ်ဝက်လောက်မှာစုဆောင်းထားပြီးသား Hacks တွေကိုရောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောတယ်။ Hack ကကွန်ပျူတာလိုပြproblemsနာတွေရှိရင်၊ ငါကိုနှစ်ခုသုံးခုတခါသုံးခါပိတ်မယ်ဆိုရင်၊ အကယ်၍ ပြင်ဆင်မှုသည်မြည်းထဲ၌နာကျင်မှုဖြစ်မည်၊ အကယ်၍ အဆင့်မြှင့်တင်မှုဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်မည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Hack ကိုဝယ်ရန်မလိုသနည်း။ MAC ဆိုလျှင်စျေးနှုန်းအတွက်အဖြေကိုကျွန်တော်သိသည်။
မည်သူမဆို MACPRO (8-core) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ Hack ရှိသလား။ အကယ်၍ ၎င်းသည် MACPRO ကဲ့သို့အလားသို့မဟုတ်ဆိုးဆိုးရွားရွားရှိသလား။
Hack များသည် MACs ကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိပါသလား။
ကြည့်ရအောင်၊ သံမှာပြtheနာမဟုတ်ပေမယ့် operating system မှာ။
ကြီးကျယ်တဲ့ပန်းသီးကဒ်ကိုကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ Mac လို့မခေါ်ဘဲ osx ။ ငါက Apple ၏စက်မှုဒီဇိုင်း၏အလှတရားကိုမဟုတ်ဘဲ OSX ၏ကြီးကျယ်မှုကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်။
ထိုအချိန်တွင်ကောင်းမွန်သော vanilla leopard သို့မဟုတ် snow leopard ထည့်သွင်းခြင်းသည် Mac ကဲ့သို့ပင်နီးပါးအလုပ်လုပ်သင့်သည်။ ငါနီးစပ်ရာအချို့သောအသေးစားကွာခြားချက်များရှိလိမ့်မည်သည့်နှင့်အတူတစ် ဦး ဇာတိ Mac မဟုတ်သောကြောင့်နီးပါးပြောရရန်အသုံးပြုရန်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုကွဲပြားခြားနားမှုများမှာ Eur1700 (အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရ) အလွန်ကောင်းသည်။
ငါမှာ 6600Gb RAM ပါတဲ့ quadCore4နဲ့ 500Gb disk ရှိ Gigabyte EP35-DS3L Motherboard မှာတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါမှာနည်းနည်းလေးတိုင်ကြားချက်မရှိဘူး၊ ငါအမြဲတမ်းမှားနေတယ် (ဗီဒီယိုမလုပ်ပေမဲ့)
ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် Trojans ပြissueနာသည် snitch နည်းနည်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာကောင်းသောအပြုအမူများကဲ့သို့ကောင်းသော firewall တစ်ခုဖြင့်ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်။ ၀ င်းဒိုးဗိုင်းရပ်စ်များကင်းကင်းနေလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စနစ်သည် ၀ င်းဒိုးမဟုတ်သောကြောင့်ကူးစက်မှုအခွင့်အလမ်းကို ၂၀ / ၂၅% အောက်လျော့နည်းစေပြီး၎င်းသည်မျက်နှာသာပေးမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ခြားနားချက်မှာတူညီသောသံသည်ဘော့စတာ ၀ င်းဒိုးများထက် osX နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးတည်ငြိမ်စေသည်။
ငါအလူမီနီယံပန်းသီး keyboard ကိုသုံးတယ်။ မတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ monitor ရဲ့တောက်ပမှုပဲ
ငါမှာ mouse လိုမျိုး wacom ဘုတ်လည်းရှိတယ်၊ ငါဘာမှမပြောဘူး။
အကယ်၍ တပ်ဆင်ခြင်းသည် vanilla ကိုတတ်နိုင်သမျှပြုလုပ်လျှင်၎င်းသည်အောင်မြင်နိုင်သည့်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Farid ။
ကောင်းပြီ၊ အမှန်တရားကကျွန်ုပ်အားအနည်းငယ်ပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်။ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းသည် Hardware မဟုတ်ဘဲ operating system သာမက Hack ဖြင့်၎င်းသည် perferct သို့သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
အခုတော့နင့်ကိုတမ်းတနေအောင်ပြီးအောင်လုပ်တော့ ... ငါနင့်နေရမယ့်အနည်းဆုံးကွာခြားချက်တွေငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား။ (ဒါအထက်) ။
စကားမစပ်၊ Hack ၏ဟာ့ဒ်ဝဲသည် MAC အတွက်မည်သည့်ဆော့ဝဲလ်ကိုမှမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် OSX ရှိခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါသလား။
အချင်းလူ၊ ငါ့ကိုပြန်ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကနာမည်ကြီးလူတစ်ယောက်လိုမေးခွန်းတွေရဲ့အဟန့်အတားကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မှာမလုံလောက်ဘူး။ ငါဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာငါသိရမယ်။
ငါ HACK အစား MAC ကိုဘာကြောင့်ဝယ်ရတာလဲ။ ဒါကတစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ MAC ဖိုရမ်တစ်ခုပါ။
မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသည်။ hack သည် mac နီးပါးဖြစ်သည်။ ဥပမာအချို့စက်များတွင်အိပ်စက်ခြင်းပြ,နာ၊ သိသိသာသာကွဲပြားသော shutdown shutdown လုပ်ခြင်း၏ပြproblemsနာ။ သိသာထင်ရှားသည်မှာ၎င်းကိုတပ်ဆင်။ မရသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်က၎င်းကိုသက်သေပြထားသောအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးအရာရာတိုင်းအလုပ်မလုပ်လျှင်စစ်ဆေးပြီး၎င်းနှင့်ဖိုရမ်များနှင့်အရာများမှဖြေရှင်းချက်များကိုမရှာဖွေပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်၌ cider ဂိမ်းများနှင့်သဟဇာတမရှိကြပါ။ အခြားအရာများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အခက်အခဲမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ (cs4 suite, ilife, neooffice, အမျိုးမျိုးသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူစသည်ဖြင့်)
iann olsen ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာများကို macintosh ဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးသူတို့သည်ငါ၊ AM နှင့် Intel၊ gigabyte နှင့် asus motherboards၊ 600 gt ဗီဒီယိုကဒ်များ၊ 9600 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် 4Gb ram, 800MHz အမြန်နှုန်းဖြင့်၎င်း၊ ဤ 2,7 မှ dual-core ပရိုဆက်ဆာများကို Macintosh ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ pa-up, hard drive 500, wifi d-link, etc စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဘာမျှမအောင်မြင်ပါ။ မြင်ကွင်းကျယ် 130-inch screen နှင့်အတူယူရို ၁၃၀ ထက်ပိုသောကြောင့်အဆုံးတွင်သင်သည်အရာအားလုံး ၇၃၀ မှ ၇၅၀ ယူရိုမျှော်စင်ပေါင်းမျက်နှာပြင်ကိုရရှိသည်။ ငါ့ကိုခေါ်ပါ 22 ကျွန်ုပ်သည်ဘာစီလိုနာမှဖြစ်ပြီးယခုအချိန်အထိယူနစ် ၅၀၀ ကျော် (သို့) အီးမေးလ်တစ်စောင်ကျွန်ုပ်ကိုရောင်းပါပြီ iannolsen@yahoo.es ကျွန်တော်ဟာကွန်ပျူတာကိုအာမခံချက်နဲ့ dual windows windows + mac တွေနဲ့ချန်ထားခဲ့ပါ
iann olsen အားပြန်ကြားပါ
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ တချို့ကပြောတာတွေကလိမ်တယ်၊ ငါ mount ကိုငါ hackintosh ကိုပုံမှန် menu ထဲမွမ်းမံပြီး Intel နဲ့ amd နှစ်ခုစလုံးကို patch မလုပ်ပဲ update လုပ်တယ် သင်လိုချင်သည့်စွမ်းအားပေါ် မူတည်၍ Mac လည်ပတ်မှုစနစ်သည်အများအားဖြင့်ယူရို ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ အကြားကုန်ကျမည့် hackintosh အချို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဤအရာနှစ်ခုလုံးအပြင် dual boot (windows + mac) သို့မဟုတ် triboot (windows + mac + linux) နှင့် operating mac အားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များ၊ အရိုး mac, win and linux ။ ဘတ်ဂျက်မလိုအပ်ဘဲလိုလားသူသည်ကျွန်ုပ်အား ၆၅၄၅၀၂၄၄ သို့ခေါ်။ သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ iannolsen@yahoo.es.province ဘာစီလိုနာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှအခမဲ့သရုပ်ပြခြင်းနှင့်အရာအားလုံးမှဖြစ်သည်
"အေးမြ" တဲ့အရာဟာပန်းသီးလိုဂိုဖြစ်ပေမယ့်သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲဟက်လိုက်ပါ ...
Leo (iAtkos 5i) ကို install လုပ်ခြင်း၊ ပြproblemနာမရှိသောနောက်ဆုံးသတင်းများ၊ နောက်ဆုံးဖြတ် ၃ ခု၊ ci / qe ပါ ၀ င်သော nvidia ကို install လုပ်ခြင်းမှပြproblemsနာမရှိပါ။ linux "မမြင်ရသော" usb အချက်အချာပင်လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်အခက်အခဲမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။
တနည်းကား၊ သင်၌ငွေရှိလျှင်မက် (သို့မဟုတ် ပို၍ အစွမ်းထက်သော hack;)) သာမန် hack ကိုဝယ်စရာမလိုပါ။
စကားမစပ်, hack ၏သက်တမ်းအကြောင်းပြောဆိုသူများအဘို့ ... သတ္တုတွင်း2နှစ်ရှိပြီ,3အဘို့အသွားနှင့်အရှိဆုံးယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ်, ပြgiveနာများမပေးနဲ့အနိမ့်ဆုံးဆူညံသံစေပါဘူး (က asus ကိုယ်ပွားဖြစ်ပါတယ်။ core2duo to me ဒါဟာယူရို ၄၇၅ နဲ့ ၁၉ မျက်နှာပါ ၀ င်ပါတယ်။
တိုတောင်းသောအားဖြင့်, ကြာရှည်ခံမှုအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်မဟုတ်။ အများကြီးပိုပြီးပေးထားသောကုသမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ov3r0n ။
ငါကအုန်းသီးအကြောင်းစဉ်းစားနေတုန်းပဲ၊ အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေလည်းရောက်နေပြီ။ သူတို့ကသူတို့စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ပြနာမှာစက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာအဖြစ်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ဘဲဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဝယ်မည့်အရာကိုသေချာစွာသိလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြနာများနှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သင်ခက်ခဲသည့်အထိကွန်ပျူတာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်မလိုအပ်သည့်အရာတစ်ခု) ။
မေးခွန်းတစ်ခုပဲ၊ အကယ်၍ Hack သည်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တွင် Mac ဝယ်သောပိုက်ဆံရှိလျှင်သင်ဘာကြောင့်အကြံပေးသနည်း။ (ငါ့မှာပိုက်ဆံရှိတယ်၊ ငါမလိုချင်ဘူးကလွှင့်ပစ်လိုက်တာ၊ လိုဂိုအတွက်ပိုပေးရတယ်)
Pd.- iann သည်သင်တင်ထားသည့်မည်သည့်အရာကိုမျှမှတ်ချက်မပေးခဲ့ကြောင်းခွင့်လွှတ်သည်။ သို့သော်သင်သည် Hack ရောင်းချခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားသည်ကိုတွေ့မြင်ပြီးသောအခါကမ္ဘာပေါ်ရှိလေးစားမှုအားလုံးဖြင့်သင်ကလုံးဝရည်မှန်းချက်မဟုတ်ကြောင်း ... ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ MAC ကိုရောင်းချခြင်းသည်သူ၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်ရောင်းချလိမ့်မည်။
ကြည့်ရှုပါ၊ Hack ကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်၊ ဖြစ်ရပ်တော်တော်များများမှာမူရင်း Mac ထက်ပိုမြန်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ပြောတာနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုက 100% အလုပ်လုပ်တဲ့စက်အပေါ်မှာမှီတည်တယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါကသင့်ကို“ no I” လိုမျိုးခွေးမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်စေဘူး အဆိုပါ tapiporla32 module ၏ piticlones အတွက်အမှားတစ်ခုရှိသည်»ဟုအဆိုပါလိုဂိုပေးဆောင်သောကြောင့်, piticlusclis64 module ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ အချင်းလူသား၊ သင်ဟာ Apple ရဲ့ပစ္စည်းအနည်းငယ်ကိုယူဆောင်လာရုံတင်မကဘဲ၊ Apple ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပါ၊ မိုက်ခရိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဆိုင်ရာနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေမဟုတ်ပေမယ့်လည်းသူဟာ operating system နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပဲ ... I ထပ်ခါတလဲလဲ - လုံးဝတသမတ်တည်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ OS X သည်ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းမတပ်ဆင်ထားသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်စေသည့်ထူးဆန်းသောပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများသို့မဟုတ်မထင်မှတ်သောအရာများမရှိဘဲဖြစ်သည်။
hacks များသည် manzanita ကိုနည်းပညာနှင့်ပတ်သတ်လိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
Jac101 ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင့်လိုမှတ်ချက်တွေကငါ့ရဲ့ MacPro ကိုဖမ်းရန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ သုံးရန်သုံးစွဲခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်ရှာနေတာက 8-core တစ်ခုပါ။ 8-core hack လုပ်ဖူးပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Quad-Core ပရိုဆက်ဆာ ၂ လုံးနဲ့သွားနေပြီလား။
ဒီ post ကအမြီးရှည်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ငါ့အတွက် jakintosh ၏ဤအရာအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းပုံရသည်။ သင်အမှန်တကယ်တွင်လုံးဝမရှိသည့်အခါအရာရာတိုင်းကိုအလွယ်တကူလုပ်ရန်လွယ်ကူသကဲ့သို့သင်ပြောဆိုသည် ငါခဲယဉ်းလိုအပ်ချက်မရှိခြင်းနှင့်သင်တန်း၏, ဘာသာရပ်၏နက်ရှိုင်းသောဗဟုသုတမရှိခြင်းကြောင့်သိသာတဲ့,2လက်ပ်တော့နှင့်အတူအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
အရာအားလုံးကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ငရဲတစ်မျိုးကုန်ကျတယ်ဆိုတာကိုသင်ဘာလို့မပြောသလဲ။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုပြောစရာမလိုပါဘူး၊ အသံနဲ့ WiFi မှလွဲ၍ အရာအားလုံးကိုအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်ပါပြီ !! ဒါမှမဟုတ်ဝေးလံခေါင်ဖျားအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ငါ့ကိုကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
အကယ်စင်စစ် Jakintosh နှင့်အလုပ်လုပ်သူအချို့သည်ပင်လယ်ဓားပြများ၏ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းမွန်စွာသင်နိုင်လိမ့်မည်။ hardware language လိုအပ်ချက်များနှင့် EFI အတုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ပြောရမည်ကိုပြောသောထိုဘာသာစကားဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်စိမ်ခံရလိမ့်မည်။ , hd ကို format နဲ့ partition ကိုဇယား etcc ပြောင်းပါ။
သင်အကြောင်းအရာနှင့်နာရီပေါင်းများစွာပြtoနာများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းကိုသင်နားလည်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်များများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုတွင်မရှိသောအချိန်ကိုနားလည်ပါက၎င်းသည်ကျိုးနပ်သည်ဟုပြောခြင်းသည် ပို၍ သင့်လျော်ပေသည်။
သင်နှင့်ထိုက်တန်သောအကြောင်းအရာကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်ထားသူများအတွက် jakintosh သည်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍များ ရှိပါကလုပ်ငန်းခွင်၌အောင်မြင်မှုအာမခံချက်မပါဘဲအလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်လယ်ကွင်းရှိလူတန်းစားအတွက်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အချိန်အများကြီး။ သင့်မှာကျန်ခဲ့တဲ့အော်ရီရယ်ယားအနည်းငယ်ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစမ်းသပ်မှုအရစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ်။
ပြီးတော့ဆူညံသံတွေဖြစ်လာရင်အအေးခံအရည်ကိုအမြဲသုံးလို့ရတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ယူရို ၂၀၀ အကွာအဝေးရှိလူမီနီယံသေတ္တာတစ်လုံးနှင့်ပန်ကာများနှင့်အခြားအရာများမပါသောစမ်းရေတွင်းတစ်လုံး ၀ ယ်လျှင်
ထိုအခါသင်သည်ကြီးမားသော CUCKS အမြောက်အများနှင့်အတူပန်းသီးကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်စိုက်ပြီးနောက်တွင်ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်နှာခေါင်းမရှိတော့ပါ။
မင်းကိုဘာပြောစေချင်တာလဲ ......... .. မင်းကိုဆူညံသံမရှိစေဘဲကြိုးမဲ့စနစ်နဲ့မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုအာမခံချက်ရှိခြင်းကိုရိုးရှင်းတဲ့ imac တစ်ခုသို့ grafts ကိုအခြေခံထားတဲ့ pc တာဝါကိုစီးပွားရေးသို့မဟုတ်လက်တွေ့ကျပုံမပေါ်ဘူး။
ဒါဟာအားလုံးအမြင်ရှုထောင့်ကိစ္စဖြစ်တယ်, ငါ့အခမဲ့အချိန်ရှားပါးသည်နှင့်€ 400 (သင်တစ် ဦး € 600 imac အားပြောသကဲ့သို့သင်တို့တပ်ဆင်ထားသည့် 1000 pc ကနေ) မှကယ်တင်ရန်လုံးဝငါ့ကိုမထိုက်တန်အမှန်တရားအမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူး။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကြွင်းသောအရာသို့…မထိုက်တန်ပါ။
PD ငါလက်ပ်တော့ပ် ၂ ခု၊ toshiba တစ်ခုနှင့်အခြားတစ်လုံးနှင့်အတူ web များဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်အချို့သော web page များ၏ jakintosh တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပါ။
၁: ကျွန်ုပ်တွင်အချိန်ရှိသော်လည်း PeCera ကိုဆန့ ်၍ ခေါင်းထက်ရိုက်ခြင်းထက်မက်သို့မဟုတ် iphone များအတွက် chorra app အချို့ကိုပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းကိုကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်။
၂.- ကျွန်ုပ်သည်အင်္ဂလိပ်စာကိုသိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်မိခင်ဘာသာစကားပြောသူမဟုတ်သော်လည်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပြnoနာမရှိသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုဖတ်ရန်။ ငါပေးဆပ်နိုင်သည့်အရာများကိုလေ့လာရန် Xcode အကြောင်းပိုမိုဖတ်လိုသော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။
၃-၀၀ ကို ၆၀၀ လောက်ပစ်ချင်တယ်
Moski: iMac ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့အလေးအနက်ကောလာဟလတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Mac Pro ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမဖတ်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာရှိတဲ့ 8 core ကတော့အညိုရောင်သားရဲတကောင်ဖြစ်ပြီးမင်းနောင်တမရပါဘူး။
ပထမဆုံးပြောရရင်ဒေါ်လာ ၂၉၀၀ ဒေါ်လာ macPro ကိုငါပြောချင်တာက (သူမှာ intel Xeons ၂ ခုပါ) ဖယ်ထုတ်လိုက်တာပဲ။
ကောင်းပြီ ... ငါခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ရှု ...
ငါလုံးဝသဘောမတူ; Apple သည် mac (Mac + keyboard + case) မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှမပြုလုပ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ မလုပ်ပါနှင့်၊ သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုရယ်စရာများစွာဖြစ်စေသည်။ ရဲ့ Core2Duo အစိတ်အပိုင်းများကိုကြည့်ကြပါစို့? Geforce 9600 လား သိုးထီး၏မက်စ် 8 gb? ။
MacPro ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမှာ processors နှစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင် ... i7, 25 GB ram, Geforce GTX290 နှင့် 4TB disk + monitor + စသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ စသည်တို့ မင်းရဲ့ညီလေးကို Mario Bros ကစားဖို့ macPro ကိုမင်းလုပ်မှာပါ။ (အရည်အအေးခံကိရိယာ (P) ကို ၀ ယ်ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၀ လျော့။ ကုန်ကျသည်။ )
Mac ကိုအဘယ်ကြောင့်ဝယ်ရသနည်း သင့်တွင်ငွေ၊ အာမခံ၊ အထောက်အပံ့နှင့်ပန်းသီးတစ်လုံးရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့် Hack တည်ဆောက်? စျေးသက်သက်သာသာနှင့်အတူတူပင် (သို့မဟုတ်ပိုကောင်း) ကို run, က upgrade လုပ်နိုင်တယ်နှင့် overclocking ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ကားလို့စ် - ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်မူတည်သည်မဟုတ်။ Intel အများအားဖြင့်မည်သည့်ခေတ်မီကွန်ပျူတာမဆို Mac လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုငါပြောရဲသည်။ သင်တပ်ဆင်နေသောဖြန့်ဖြူးမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Jaca101: အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်၎င်းတို့သည် Core i7 အတွက်လက်ရှိ Xeon ကိုပြောင်းလဲတော့မည် (Xeon သည်အလွန် xd ဟောင်းဖြစ်နေပြီ) ဖြစ်သည်။
Hackintosh တွင် OSX 10,5,8 ကို run သည်
Core2Quad Q9650, Gigabyte GA-EP35-DS4, 8GB ram၊ Geforce GTX280, 500GB Disk; ၎င်းသည် Imac တစ်ခုထက်အနည်းငယ်ပိုကုန်ကျသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ ၎င်းကို Adobe ၏အစုအဝေးနှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
သုည patch အားလုံး ၁၀၀% အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုယုံကြည်တယ်။ PeCera xD ကိုသူချစ်လို့ဒီ feline ဟာရေကူးတတ်လာတယ်။
PS: အလေးအနက်ထားပြောရမယ်ဆိုရင် OSX86 ပရောဂျက်ဟာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်မပြည့်သေးပါဘူး။ အက်ပဲလ်ဟာ core2duo ကိုပြောင်းလိုက်တာမတော်တဆထိခိုက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
တစ်ယူသန်ဆန်မှုနှင့် "isms" အားလုံးအပြင် Apple သည်ငါယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောပိတ်ထားသောလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိရထားပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်လိုက်ဖက်သော hardware architecture သို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ဤသဟဇာတဖြစ်သောဟာ့ဒ်ဝဲသည်သင်၌အမှန်တကယ်ရှိသည့်အရာများကိုကောင်းစွာအသုံးချရန်ဖြစ်နိုင်သည် - ဒီဇိုင်းနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်။
ငါပန်းသီးကိုမ ၀ ယ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဂျင်တီးနားမှာကပိုပြီးစျေးကြီးပြီးယေဘုယျအားဖြင့်မကောင်းဘူး။ ကျွန်ုပ်တွင် 8100 မှ စတင်၍ မဖြေရှင်းနိုင်သောဟာ့ဒ်ဝဲပြတ်တောက်မှုသမိုင်းကြောင်းရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ OSX + ကီးဘုတ် + မောက်စ်နှင့်ကျန်တဲ့ကျန်တာတွေအတွက်ငါပေးချေသည်။
ကောလဟာလအတွက် jaca101 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှာပြီး၊ ဘာမှမရှာရရင်၊ ဟင်နရီ i7 microso အကြောင်းပြောဆိုတာတောင်မှဒါ့အပြင် Xeon ဟာပိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ထင်မြင်ချက်တွေရှိတယ် အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း .. ဒီတော့တရားဝင်ငါဘာမှမတွေ့ရဘူး ... ဟင်နင်သတင်းကိုဘယ်မှာကြည့်ခဲ့တာလဲ။
ငါဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးဖိုရမ် (သို့) 3d မှာမေးသင့်ပေမယ့်ဟေး။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုဒီနေရာကိုမင်းကူညီနိုင်မှာပါ။
2,66 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" ပရိုဆက်ဆာ (4-core) နှင့် 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" ပရိုဆက်ဆာ (8-core) နှင့် MacPro အကြားစွမ်းဆောင်ရည်သည်ကွာခြားမှုရှိပါသလား။
2,66 Ghz နဲ့ 2,26 အကြားကွာခြားချက်တွေအများကြီးရှိပါသလား။ 8-core မှာ ၂.၂၆ ကိုအစား ၂.၆၆ ပရိုဆက်ဆာ ၂ လုံးကိုအစားထိုးတာကယူရို ၁၂၆၀ ပါ။
နောက်သေးငယ်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့မူအရကျွန်တော်ဟာ 8-core ထက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအရာကိုရတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့်၎င်းကိုတိုးချဲ့ချင်ပါတယ် (RAM and Hard Disk) ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြေခံကိုဖမ်းမိပါက၊ ငါသီးခြားဝယ်နိုင်သည့်အမှတ်တရများသို့မဟုတ် Hard Disk များ? (ဟုတ်ပါတယ်၊ ပန်းသီးဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ တရားဝင်စတိုးတစ်ခုမှမဟုတ်ပေမယ့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်) ဆိုလျှင်ဘယ် application ကမှအမြင့်ဆုံးထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (ငါ RAM အမှတ်တရများကိုကြည့်ပြီး၎င်းတို့သည်အလွန်စမတ်ကျသော်လည်း၊ အခြေခံသည် 6Gb ကိုယူဆောင်လာသည်၊ 1 × 1 slot အတွက် Gb, ဒီတော့သင့်မှာအခမဲ့ slot နှစ်ခု6ခုသာပါရှိသည်။ 8Gb configuration သည် 8x4Gb ... ရှုပ်ထွေးပါသည်။
Apple LED Cinema Display 24″ မော်နီတာသည်မည်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြောင်းမည်သူမဆိုသိလား။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏ LG နှစ်ခုကိုဆွဲယူမည်။ နောင်အနာဂတ်တွင်မည်သူသိမည်နည်း။
စကားမစပ်၊ ယခုငါရပြီ၊ ခရစ္စမတ်ပွဲပြီးနောက်သို့မဟုတ်ခရစ်စမတ်အပြီးပိုကောင်းမည်လားစျေးနှုန်းများကွဲပြားမည်ဆိုလျှင်ငါဆိုသည်။
Moskis: ဒီသီအိုရီကထုတ်ကုန်အသစ်တွေစတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်စျေးအနည်းငယ်ကျလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။ ၎င်းကို Mackera blogosphere မှ ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီလတွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် https://www.soydemac.com/2009/09/28/rumor-nuevos-imac-en-muy-poco-tiempo/
1.- i7 ၏အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်သူတို့သည် Macs တွင်ထည့်သွင်းခံရသည်မှာထင်ရှားသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်မည်လား။
2.- မကြာသေးမီကကျွန်ုပ် Macbook Pro ကိုဖြုတ်ပြီး testboard ပေါ်ရှိအစိတ်အပိုင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်များကကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသကဲ့သို့သည်းခံမှုနှင့်အမှားအယွင်းများသည် ၁% အောက်သာရှိသည်။ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မော်ဒယ်များသည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းသိလိုစိတ်က + -1% အောက်လျော့နည်းသောလက်လီတန်ဖိုး၏ + -1% နှင့် + box ကိုမော်ဒယ်များတွင် (-7%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိလိုသည်မှာ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကတ်ပြားပုံစံ၊ Hard drives, motherboards စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ) …
သို့သော်၊ ငါးတိုင်ကီအမှားပြုလုပ်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ + -7% သည် software နှင့် hardware အမှားများ (အီလက်ထရောနစ် / ဒစ်ဂျစ်တယ်အမှားအယွင်းများ) ကိုထိန်းချုပ်ရန် ၁၀% ပိုအလုပ်လုပ်စေသည်။ သို့သော်စက်သည်အလွန်များပြားသောကြောင့် ၉၀ % သည် Mac ၏ ၁၀၀% နီးပါးထိရောက်မှုထက်သာလွန်သည်။
မင်္ဂလာပါ ... သတင်းသည်နေရာတကာမှာပါ။ တကယ်တော့ကောလဟာလဖြစ်ပေမယ့်သိပ်တော့မဝေးလှပါ။
MacPro နှင့် (ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ) video and 3D အတွက် 8-core တစ်ခုသည်လုံးဝ BESTIAL ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည် 3D xD ရှိသူများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်) ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်။ ခြားနားချက်မှာ 8 သည် MacPro နှစ်ခုဖြစ်ပြီးစက်တစ်ခုတည်းတွင်ဖြစ်သည်။
ယေဘူယျစွမ်းဆောင်ရည် 800Mhz = S နဲ့ကွဲပြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး၊ သင်ကလေးလံတဲ့ rendering အပိုဘောင်အနည်းငယ်ရလိမ့်မယ်။ Xeon သည် Turbo Boost (dynamic overclocking) ကိုယူဆောင်လာသည်ကိုလည်းမမေ့ပါနှင့်။
RAM နဲ့ပတ်သက်ပြီး ... 4x2Gb ၀ ယ်တာဟာပိုကောင်းတယ်၊ ရေရှည်မှာတော့အဲဒါကိုချဲ့ထွင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ 4Gb (16x4Gb) သို့ဘာသာပြန်သောအခမဲ့ slot ၄ ခုရှိလိမ့်မည်။ disk အတွက်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ၊ စုစုပေါင်းသင့်တွင်အခမဲ့ bays (4TB) ရှိလိမ့်မည်။
Monitor hmm ... ငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ "ဒီဇိုင်း"၊ စပီကာ၊ ကင်မရာနဲ့ + 120px ဒေါင်လိုက်မော်နီတာတစ်ခုအတွက်ပေးရတာကိုမမျှတဘူး။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော (နှင့်သင်ပြောင်းလဲလိုပါက) LG LED Monitor တစ်စုံဝယ်သည် (သူတို့က mac နှင့်အတူငရဲသွားကြပြီး Led Cin …ပန်းသီးထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သောမော်နီတာများဖြစ်သည်) ။ ငါမသိသောထုတ်လုပ်သူနှင့်ငါခန့်မှန်းစျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်။
လောလောဆယ်ငါ Leopard ကို Asus Laptop ပေါ်မှာတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါ့အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ စက်အတွက်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ပေးရတယ်၊ ငါ Leopard ကို PC မှာ install လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှဘဲငါ wifi ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ငါမကြာမီစတင်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းကဒ်။
ငါ Mac အတွက်ငွေပေးချေနိုင်တဲ့အခါငါပေးရမယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာငါကော်ပီတစ်ချပ်ဝယ်တော့မယ်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲသာမကဘဲ iLogic, Finalcut ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေအတွက်ပါ Mac ရဲ့ဈေးနှုန်းဟာစျေးကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ အနည်းငယ်ဖော်ပြရမည့်စတူဒီယိုအနိုင်ရမှုအတွက်အရာရာတိုင်းသည်စျေးပေါသော်လည်းသင့်ကိုရူးသွပ်စေသည်။ ထို့နောက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
LogG သည် MrGalgo ၏စျေးကြီးသောအစီအစဉ်လော။ မည်သည့်ထိပ်တန်းစောင်ထဲတွင်သင် Software ကို ၀ ယ်သလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ငါရေးသော Hackintosh က Leopard 10.5.7 ကို MacBookPro4,1 အဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်၊ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ မူလ Mac ၏ဈေးထက် ၀ က်အောက်သာရှိသည့်ပန်းသီးစတစ်ကာကပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါစတိုင်၏မှတ်ချက်များကိုကြိုက်; ငါ osx ကို install လုပ်တဲ့ဒီ xxx ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် wifi ဒါမှမဟုတ် audio etc မရှိဘူး။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။ အလုပ်ပြီးနောက်သင်တစ်ဝက်အသင်းရှိသည်ထွက်လှည့်!
အမှန်တရားကတော့ဘယ်ကောင်းကျိုးမှမတွေ့ဘူးဆိုတာပဲ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူများအတွက်ကားမောင်းသူများနှင့်ပြသနာများမဖြစ်ပွားစေရန်ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုသေချာစွာရွေးချယ်ခြင်းသည်သူတို့၏အချိန်ကိုအမှန်ပင်ဖြုန်းတီးခဲ့သည်။ အမှန်မှာယင်းကိုလုပ်ဆောင်သူများသည်၎င်းကိုစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ယူပြီးနာရီနှင့်နာရီပျောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤ ၁၀၀ × ၁၀၀ လည်ပတ်မှုအတင်းအဖျင်းများထဲမှတစ်ခုပါသောသင်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဂုဏ်ပြုပါသည်။
မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို၎င်းတို့တွင်ကြီးမားသောသေတ္တာတစ်ခုထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသောဆူညံသံများနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ကြီးမားသောကယ်လိုရီပမာဏကိုထုတ်ပေးသောကြီးမားသော OS ရှိသည်။
ငါတို့လိုချင်တာကိုကြည့်ရအောင်၊ imac ကပိုပြီးလက်တွေ့ကျတယ်။
ကျွန်တော့်လက်ချောင်း xdd မရှိတော့ဘူး၊ ငါမှတ်ချက်ပေးလိုက်တယ်၊ ဒါကိုငါတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းကြည့်ကြရအောင်၊ imac ကပိုပြီးလက်တွေ့ကျတယ်။
လူတိုင်းကောင်းသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ ၎င်းသည်ဗဟုသုတ၊ အချိန်နှင့်စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ osx ကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်ခိုင်မာသောအတွေးအခေါ်အရခိုင်မာစွာစုဝေးခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်တော့်အသက် ၁၅ နှစ်မှာစမ်းသပ်မှုတွေကိုကြိုက်တယ်၊ အခုလိုပဲ၊ ကွာခြားချက်ကအခုအချိန်မှာငါမှာအချိန်မရှိသေးဘူး၊ ငါ့ရဲ့ယူရို ၂၀၀၊ ယူရို ၄၀၀ ချွေတာတာ၊ ရိုးရိုးကွန်ပျူတာပစ္စည်းအတွက်ယူရို ၄၀၀ ထက်နည်းနည်းပိုရင်းနှီးတာအတွက်၊ OSC ကို install လုပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာမည်သို့အဆုံးသတ်မည်ကိုကောင်းစွာမသိဘဲ၊ ဖြစ်လာမည့်ပြtheနာများနှင့် hacking စာမျက်နှာကိုသွားရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်မည်သည့်နေရာမှမရှိသည့်အချိန်ကိုယူရန်ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသောအားထုတ်မှုအတွက်လျော်ကြေးမပေးနိုင်ပါ။ ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်လူရွှင်တော်အလူမီနီယမ်အမှုန့်ကိုရှာနေလျှင်၊ ပန်ကာများမပါဘဲအခမဲ့ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည့်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု၊ အရည်အအေးပေးစက်များ၊ ဥပမာ iMac ၏အမြင့်တွင်ရှိသောမော်နီတာကိုရှာဖွေနေသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၂၁″ iMac ကုန်ကျတဲ့ဈေးနဲ့မဝေးတော့ပါဘူး။
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဆက်နွယ်မှုအချိန်ကာလများ၊ ရလဒ်များကိုကောင်းမွန်စွာရရှိနိုင်သည့် PC နှင့် iMac တို့အကြားစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ မှလွဲ၍ moding အတွက်လျော်ကြေးမပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်အားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကနားလည်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
ဒါ့အပြင် ၂၁ နဲ့ ၂၇ of ရဲ့စျေးနှုန်းတွေကသူတို့ရဲ့ nehalem နဲ့အတူတူပါပဲ။ ငါက hardware ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ရောင်းချနေတာလို့ထင်ပါတယ်။
iMac သည် ပို၍ လက်တွေ့ကျပြီးသံသယမရှိလောက်ပါ။ ပထမကမ္ဘာ။ ဤတွင် 4th အတွက် imacs ဒုတိယရွေးချယ်ရေး၏ဖြစ်ကြသည်။ Monitor နဲ့သူ့ရဲ့ pixel အသေတွေ၊ ပြinနာတွေအမြဲရှိနေတယ်၊ ​​၆ လအတွင်းပျက်ကွက်တဲ့ dvd pacifier၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်သည်အမေရိကန်ထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာထက် ပိုမို၍ စျေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်ထိုသို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ပြီးချွတ်ယွင်းနေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးရန်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုသို့ပေးပို့ရန်စက်ကိုအခါအားလျော်စွာရပ်တန့်ရန်လိုလျှင်၎င်းသည် Apple အားသာချက်ကိုဆိုလိုသည်။ မတည်ရှိပါဘူး။
ငါစျေးနှုန်းရဲ့ထက်ဝက်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ Wi-Fi ဒါမှမဟုတ် $ 10 အသံကိုငါစွန့်လွှတ်လိုက်ရင်အဲဒါတန်တယ်။
79 Farid အတွက်သင်တင်ထားသော link သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုနားမလည်သူများသည်ဤနေရာတွင်ကောင်းသောအစရှိသည်
သူတို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေ၊ မင်းမှာအချိန်ရှိရင်စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကအခြား link ကိုငါသိပြီ
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ယက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကို သုံး၍ စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ Mac OSX 10.5.7 ကိုကျွန်ုပ်၏ Dell Mini9on netbook ပေါ်တွင် install ပြီးအောင်စီမံပြီးပြီဟုထင်ပြီး၎င်းသည်အတော်လေးလက်ခံဖွယ်ကောင်းသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုဒီမှာမြင်ကွင်းအချို့ကိုထားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်နောက်သို့လိုက်ခဲ့သည့်အဆင့်များနှင့်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြသသည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်ရေးသားပါလိမ့်မည်။ အလွန်အကျဉ်းချုံးပြောရရင်တော့ DellEFI method လို့ခေါ်တဲ့ Mac OS နဲ့ bootable USB stick ကိုဖန်တီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ BIOS နဲ့ patch အမျိုးမျိုးမှာချိန်ညှိမှုများစွာပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ DellEFI လို့ခေါ်တဲ့ application တစ်ခုနှင့်အတူ။ အတိုချုပ်ပြောရရင် Apple ထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေးကိုမရောက်နိုင်သေးပေမယ့်ဒါဟာတော်တော်လေးလက်ခံနိုင်တဲ့ရလဒ်ရစေမယ့် mini Macbook ပါ။ Mac OS Air သည် Mac OS Air ကဲ့သို့၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။ ကျနော်တို့ဆက်လက်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီနည်းနည်းလေး Hack Vs Mac အငြင်းပွားမှုမှရွေ့လျားနေစဉ်ငါတစ်ယောက်ယောက်မသိသောအရာတစ်ခုကိုပြောပြရန်လာသည်။
ဒီနေ့အတည်ပြုလိုက်တာက ၂၇″ iMAC အသစ်ဟာ Core i27 ပရိုဆက်ဆာနဲ့ 7-core MAC PRO (ဒီ Duos နှစ်ခုဟာခေတ်နောက်ကျနေပြီ) ထက်ပိုအားကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့် iMAC ကို 8 RAM (2 နဲ့သက်ဆိုင်) ရပြီ , HD Teras of 8 Teras နှင့်၎င်းတို့တွင် ၂၇ LED မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘတ်ဂျက်တွင်မရှိသော၊ အားလုံး၏ယူရိုတစ်ဝက်အတွက် ... ၁၇၀၀ ဒေါ်လာအတွက်သင့်တွင် bug (MAC) တစ်လုံးရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။ 16-core MACPRO ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Hack စျေးနှုန်း (သင် LED display ကိုရေတွက်ရမည်ဖြစ်သည်) ... ဆင်ခြေမျှမရှိပါ။
အိုးငါငါဖတ်ပြီးကတည်းကငါ့နှုတ်ကိုဖွင့်နှင့်အတူရှိခဲ့ ... ဒါပေမယ့်ငါကပိုစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်သောအခြားနောက်ထပ်အပိုင်းအစထားခဲ့ပါ
ကောင်းပြီ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးသည်အလွန်ကောင်းပြီးဆူကက်စ်အတွက်၎င်းသည်မတည်ရှိပါ။ Buenos Aires တွင် Apple ၏ထိပ်တန်းပြန်လည်ရောင်းချသူသည်၎င်း၏အဓိကထုတ်ကုန်အဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
iMac 24 မှ ​​3.06 GHz
ဒေါ်လာ ၁၁,၉၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း - ဒေါ်လာ ၂၆၉၉
•2GHz Intel Core 3,06 Duo ပရိုဆက်ဆာ
4 MHz DDR2 SDRAM ၏3GB (နှစ်ခု 1.066 GB module တွေအတွက်); SODIMM slot နှစ်ခုသည် 8 GB အထိထောက်ပံ့သည်
NVIDIA GeForce GT 130 ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာ 512MB မှတ်ဉာဏ်ပါ ၀ င်သည်
• ၂၄ လက်မ (ကြည့်ရှုနိုင်သော) တက်ကြွသော matrix TFT LCD တောက်ပသောမျက်နှာပြင်ပြမျက်နှာပြင်
ဒါ့အပြင်ဒီအဆင့်မှာကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမအောင်မြင်မှုတွေမှာ imacs ရဲ့သူကပြောတယ်ပြproblemနာကိုထည့်သွင်းရမယ်။
ညံ့ဖျင်းသော Mackeros နှင့်၎င်းတို့၏ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ၏အရည်အသွေးကိုလေးစားစွာပြောဆို။ ဒီမှာပီရူးမှာ Mac Pro ကဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပိုပေးပြီး Imac $ 5000 ကုန်ကျတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့အတွက်သူကစမ်းသပ်ဖို့ 2500 အတွက် hackintosh တစ်ခုဆောက်ခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်းကိစ္စတွေမှားသွားရင်စုစုပေါင်း Apple အထက်တန်းလွှာကွန်ပျူတာတွေမှာဒေတာနဲ့ usb port တွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ Snowleopard ထက်အများကြီးသာလွန်တဲ့ Win500 ကိုကျွန်တော်တပ်လိုက်တယ်။ ၂.၃၃ Ghz၊ ၂၈g ddr7 မှတ်ဉာဏ်နှင့် ၂၅၆ သာ nvidia ဂရပ်ဖစ်ကတ် gygabite g41 motherboard Intel core2duo ပရိုဆက်ဆာဖြင့် gggabite g2.93 motherboard နှင့်အတူအရာအားလုံးကိုသိမ်းထားရန်စဉ်းစားနေသည်။ ဤအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်၏ windows2ကိုလေကဲ့သို့သောဒီစက်ဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများရှိပြီး Mac အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ကျော်ကြားသည်မဟုတ်ပါ။
စကားမစပ်: နှင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းနည်းခြင်း။ Knight သည်ကျားသစ်သို့ပြန်သွားသည်
Rafo၊ မင်းရဲ့ရန်လိုတဲ့သဘောထားကိုငါတကယ်နားမလည်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားတစ်ခုအားကြွယ်ဝစေမည့်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတွင်ရှိနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သင်ပြုလုပ်နေစဉ်မည်သူမဆို၏စိတ်ကူးသည်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်ဟုမထင်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများတွင် linux, mac, windows နှင့် solaris များကိုပင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးအဆိုးဆုံးစနစ်သည် windows များအတိအကျဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်လုံးဝယုံကြည်ပါသည်။ မျှော်လင့်7သည်အမှန်တကယ်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ကောင်းသည်။ သို့သော်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ခဏစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါ Ubuntu 9.10 ကိုပိုနှစ်သက်သည်။
Pfff Farid ကသူလိုချင်တာကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ပြုပါ။ OSx အသုံးပြုသူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် Windows တွင်ယခင်ကရှိခဲ့ဖူးပြီး ၆ လကြာပြီးနောက် OSx မှ windowsx သို့မပြန်ပါ။ သူကောင်းစွာပြောခဲ့သလို၊ သူ့နိုင်ငံမှာသူတို့ဟာအရမ်းစျေးကြီးပြီးလက်လှမ်းမမှီတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်၊ ​​ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပန်းသီးကလူတွေကိုဒီပြissueနာကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ငါဟာ သူတို့အဲဒီမှာစျေးကွက်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့သေချာ။
Rafo သည်သူ၏ hackintosh ကိုပိုမိုနှစ်သက်ပါကသူနှင့်သူပျော်နေပါပြီ။ သူ၏ box box သခွားသီးနှင့်နေရာတိုင်းတွင်ကေဘယ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ ဆူညံသံနှင့်နေရာအကျယ်အ ၀ န်းအပြင်၎င်းသည် OSx patched ဖြစ်နေဆဲပင်။ သခွားသီး။
လူတိုင်းသည်မတူညီသောနည်းဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ငါ့သားသည်ဘောလုံးတစ်လုံးနှင့်ကစားနေသည်။ အိမ်နီးချင်း၏စက်ဘီးနှင့်ကစားစရာများလည်းကောင်းသည်။ အကယ်၍ သူသည် hackintosh ကိုလုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်သူအတွက်အဆင်ပြေမည်၊ သူပျော်ရွှင်မည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ hackintosh အများစုသည် ၁၀၀ × ၁၀၀ အလုပ်မလုပ်ဘဲအသံ၊ ကွန်ယက်နှင့် Wi-Fi ကဒ်များကိုအလုပ်မလုပ်ပဲချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သည်းခံမှုအနည်းငယ်ဖြင့်သာအနည်းငယ်သို့မဟုတ် ပို၍ နည်းသောတည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်သော hack ကိုရရှိသည်။ ငါကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့သဘောနဲ့မပြောမိအောင်သတိပြုပါ။
ငါ W7 ကိုလည်းသုံးတယ်။ အမှန်တရားကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းစိတ်ပျက်စေတယ်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမြင်ကွင်းပဲ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးဟာမြင်ကွင်းမှာကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေတုန်းပဲ၊ သိသိသာသာမြန်လာပြီးအရင်းအမြစ်တွေနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် OSx မှာ ၁ နှစ်နီးပါးကြာပြီးတဲ့နောက် သူတို့ကငါ့ကို pc ကသခွားသီး ၄ သုတ်ပေးရင်တောင်ငါ OSx ကနေ windos ကိုသွားခဲ့တယ်။ သူတို့ဆီက Apple ကနေသင်ယူစရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။ သူတို့ကဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနဲ့တခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကျေးကျွန်တွေဖြစ်နေဆဲပဲ။
မလိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ OSx ပေါ်တွင်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Eye သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PC ရှိဒီဇိုင်းပလက်ဖောင်းသည် socket လျှင် 500v ဖြင့်မီလီမီတာ ၅၀၀ ကိုသာထောက်ပံ့ပေးသောအခါ Apple က၎င်းတို့သည် 5Amp ဖြစ်သည်။ ခြားနားချက်မှာထူးခြားသည်။ ဒီတော့ Laptop သို့မဟုတ် Desktop PC မှာ 1' of အိတ်ဆောင် HD များလိုအပ်ချက်အရ boot လုပ်ရန် 2,5 usb's ရှိရန်လိုအပ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်မူ OSx2တွင်ကျွန်ုပ်ကျန်ရှိတော့သည်မှာကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ ကောင်းပြီကြည့် OSx ဒေတာများဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ် Snow ဖြစ်ခြင်းသည် poop ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြံပြုခြင်း Leopard ။ ပြtheနာမှာသင် hackintosh ကိုအသုံးပြုနေသည်။ သင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်မသိပါကသင်ပြသင့်သည်မှာအလေးအနက်ယုံကြည်သည်။ ၀ င်းဒိုးတွင်၎င်းသည်ဘာလဲဆိုတာမသိသေးသောတတိယပါတီပရိုဂရမ်များကိုသင်ဆွဲဆောင်ရန်လိုသည်။ ဖွယ်ရှိသည်မှာ Hard & Soft OSx base သည်သင်၏ hackintosh တွင် 1 × 100 လောက်ကောင်းမွန်စွာအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခြင်းကြောင့်သင်၏ OSx patch လုပ်ထားသောကြောင့်သင်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမသိနိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ပြproblemsနာဖြစ်စေသည်။
ဤအရာအားလုံးသည် Apple ၀ ယ်ရန်မဖြစ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သူသည် hackintosh အတွက်အခြေချရန် မှလွဲ၍ အခြားရွေးစရာမရှိတော့ပါ။ ယခုသူသည်ပြတင်းပေါက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့သြဖွယ်ရာစကားများကိုပြောနေသည်။ .. အရောင်များ။
OSx ကိုမကြိုက်လျှင် Windows ကိုသုံးနိုင်သည်၊ Antivirus, Trojan scan နှင့်အခြားဆော့ဖ်ဝဲလ်များကိုရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်၊ အရံသိမ်းဆည်းခြင်းများ၊ Space-style ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ် multi-desktop, uninstall စီမံခန့်ခွဲမှုပရိုဂရမ်များနှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပီရူးတွင်ပင်အတုအယောင်ရှိသည်၊ ဒီနိုင်ငံဟာပြည်သူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ငါတို့က troll ကိုရောက်နေတယ်။
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားရမယ့်အချက်ကတစ်ယူသန်ဝါဒပါ။ Macintosh ကအကောင်းဆုံးဆိုတာအကောင်းဆုံးသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ... Windows ဟာ operating systems မှာစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ မလိုချင်ပါက၎င်းသည်အရာရှိသည်၊ အချို့သောရှုထောင့်များတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ) ။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ... မက်သည်ပိုမိုလှပသည်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထား ... အထူးသဖြင့်လက်တင်အမေရိကရှိစျေးနှုန်းများကိုအလွဲသုံးစားမပြုသည်ဟုထင်သောသင်၏လက်ကိုမြှင့်တင်ပါ။ သင်ဟာစျေးကွက်အလွန်ကောင်းပေမယ့်ချို့ယွင်းချက်ရှိတဲ့စက်ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုက mini-cds တွေကိုအသုံးပြုဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းတွေ ... အရည်အသွေးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကဒ်များသည်အလွန်နိမ့်ကျသည်။
သင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုကြိုး (ကြိုးတစ်ချောင်း၊ ကောင်းသည်၊ မော်နီတာပါဝါ၊ DVI နှင့်တာဝါတိုင်အတွက်ဖြစ်သည်) သို့သော် Mac အသုံးပြုသူသည်မည်သည့် pc ၏ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုကိုမနှစ်သက်သနည်း။ …။ သင်ပြောင်းလဲချင်သည်၊ သို့သော်သင်လိုချင်သည့်အရာနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင် Mac နှင့်ထပ်တူထပ်မျှရပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်စျေးအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Apple သည်၎င်းတွင်ရှိသည့်အရာများကိုမည်သို့ရောင်းရမည်ကိုသိသည် (ကြော်ငြာကိုလေ့လာသောသူများသို့မဟုတ်အများပြည်သူ ၀ န်ထမ်းများကကျွန်ုပ်ပြောနေတာကိုသိကြသည်)
ဥပမာ - iMac နှင့် macbook တစ်ခုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် nonconformist xD ဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ farid နှင့် jaca
ရာအရပျထဲကဖြစ်ကြောင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများအတွက်အရမ်းဆိုး; နှင့်ဤလက်ရှိကမ္ဘာကြီးထဲမှာပို။ ပင်ဆိုးရွားလှ၏။ ဒီမှာကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာက - ငါဟာသူ့ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအထူးလေးစားပါတယ်။ ငါကြိုးစားခဲ့လို့၊ လှပ၊ တည်ငြိမ်ပြီးအလိုလိုသိတယ်။ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဝယ်ယူဖို့မတတ်နိုင်သူတွေကိုအထင်သေးအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကစိတ်ပျက်စရာကောင်းတာပဲ။ တစ်ယောက်ယောက်ကသူ့ရဲ့ Ferrari ကို ၀ ယ်နိုင်ရင်သူကသူ့အတွက်ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Toyota ကိုဆုံးဖြတ်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအားလျော့လို့မရဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆုံးမှာတော့ဒီဇိုင်းနဲ့စွမ်းအင်နောက်ကျနေပေမဲ့လည်းအတူတူပဲ။ အတုအယောင်လား? ဘာလဲ
အကယ်၍ အများစုကမကြိုးစားခဲ့လျှင် WinVista ကိုအဘယ်ကြောင့်ရိုက်နှက်သနည်း ငါ4ghz မှာ P2.8 စက်အဟောင်းနဲ့အတူလုပ်ခဲ့တယ်။ မှတ်ဥာဏ် 1gb ပဲရှိတာက Photoshop နဲ့တောင်လေပဲ။ Xp နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုပြproblemနာမရှိဘဲပျက်ပြားခြင်းသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှေးခြင်းမရှိဘဲလုပ်ခဲ့သည်။ ငါကဲ့သို့သောပုံမှန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်၎င်းကိုနားလည်နိုင်သောအခက်အခဲအချို့နှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုစမ်းသပ်ရန်အတွက် hackintosh တစ်ခုကိုငါတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Imac ကဲ့သို့တူညီသည်မဟုတ်၊ ၎င်းသည် Mac Pro ထက်ယုတ်ညံ့သည်ဟုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်။
Snow ဆိုတာ Windows ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်မရှိဘဲပြစ်တင်ဝေဖန်သူတွေအတွက်ပါ။ osx update တွင်တွေ့ရသောကြောက်မက်ဖွယ်ရာများကိုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှကျူးလွန်လျှင်ကော။
ပြီးတော့သူတို့ဟာ Vista ကိုအရင်းအမြစ်များစားသုံးခြင်းနှင့်ထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုခြင်းတို့ကြောင့်ဖျက်စီးခံခဲ့ရသည်ဟုထင်ရန်။
Jaca101 ငါထက်အဆတစ်ထောင်သည်မင်းထက် troll ဖြစ်ဖို့ပိုနှစ်သက်သည်
ငါ Jaquita သဘောတူတယ် ခင်ဗျားအဲဒီမှာမွေးဖွားတာကိုမင်းနိုင်ငံကအပြစ်မတင်ပါဘူး။ မသိဘဲလူတွေနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ ဒါဘဝပဲ။
အားလုံးသည်နိဂုံးချုပ်တစ်ခုသို့ ဦး တည်သွားသည်။ စတိဗ်ဂျော့ဘ်၏ပါရမီနှင့်ကျွန်ုပ်၏မက်လုံး၊ အိုင်ဖုန်းနှင့် iPod ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်၏ထာဝရ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းကနည်းပညာအားလုံး၏အထူးသဖြင့်အသစ်အဆန်းဖြစ်ပါကအားနည်းချက်များအားလုံးနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သမျှအားနည်းချက်များကိုပါ။ ဤပလက်ဖောင်း၏အထူးကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း၊ ပါဝါနှင့်တည်ငြိမ်မှုအတွက်အနုပညာကိုနှစ်သက်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏လေးစားမှုသည် ဒီတော့ MAC ပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသော MADEROS သည် Makeros ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးပညာရှင်များကိုဤခမ်းနားသောပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်သာမက၊ ဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ သူတို့ရဲ့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ ၅% စက်ကိုသုံးပြီးစကားပြောရုံနဲ့သီချင်းတွေကိုနားထောင်ရုံပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုစောင်းနင်းပြီး“ ငါက Mac ပါ” လို့ပြောဖို့အတွက်ဖိနပ်ဒါမှမဟုတ်ဈေးကြီးတဲ့နာရီလိုလိုပေါ့။ သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်တက်အဆုံးသတ်။ သူတို့ကိုငါမနာလိုပါဘူး ငါလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လူသားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကံမကောင်းစွာပဲ Windows ၏အားနည်းချက်များနှင့် Mac ၏အထက်တန်းလွှာများမရှိသောအထင်ကြီးလောက်ဖွယ် Ubuntu Linux 9.10 karmic Koala တွင်၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစံပရိုဂရမ်များကိုမသုံးသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကွန်ပျူတာတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့ကော်ပိုရေးရှင်းတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ကြတယ်။
Microsft သည်အိမ်များတွင်ပိုမိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးဈေးနှုန်းချိုသာသည်။ Linux နှင့်နည်းပညာကျောင်းသားများ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ပရိုဂရမ်မာများ၊ ကွန်ယက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကွန်ပြူတာ ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများနှင့်သက်ဆိုင်သောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကအသုံးပြုသည်။ ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်၌ကျောင်းတွင်ကွန်ပျူတာကိုစတင်အသုံးပြုသောအသေးစားကျောင်းသားတစ် ဦး ရှိပါကသင်ကသူ့ကို OSx ကိုသင်ဝယ်ယူလိုက်သည်၊ သို့သော်သူ၌အခြားနည်းလမ်းများရှိပြီးသင်ယူမှုများကြောင့်စိတ်ထိခိုက်စရာမရှိပါ။ ကံမကောင်းတာကအစိုးရအေဂျင်စီတော်တော်များများမှာ MS ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါ၊ ငါကဆရာ ၀ န်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကွန်ယက်ကသူတို့အတွက်အလုပ်မလုပ်လို့၊ pc ချိတ်ဆွဲထားတာတွေစသဖြင့်၊ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလား ဟုတ်တယ်ငါကံမကောင်းတာကအိမ်မှာမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ပျက်ကျတာကအရေးမကြီးပေမဲ့အလုပ်မှာရှက်စရာပါ။
ဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်းပန်းသီးတစ်လုံးသည်စတိုင်ကျသောဒီဇိုင်းအတွက်သာမပေးချေပါ။ ၎င်းသည်အစုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြင်ပိုင်းဒီဇိုင်းထက်များစွာပိုသည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲပြီးပျော့ပျောင်းသော၊ ဆူညံသံမရှိဘဲ၊ ကြိုးများမပါရှိခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြင့်သယ်ဆောင်လာသည့်ကိရိယာများသည်၎င်းကို plug and play ဖြစ်အောင်သင်နှင့်သင့်သူငယ်ချင်းအားရုံးခန်း၊ Acrobat Reader၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ picassa နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များစာရင်းကိုမေးရန်မလိုပါ။ .. ကောင်းပြီ, ငါမင်းကိုသင်တော့မသိတော့ပြီဟုငါမပြောဘူး များသောအားဖြင့်သူတို့သည် Mac ကိုတွေ့မြင်ရပြီးပြင်ပဒီဇိုင်းကိုနှစ်သက်ကြသော်လည်းလက်တွေ့တွင်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ပရိသတ်များသည်လက်တွေ့မကြားဖူးသည့်အပြင်အပူလွန်ကဲခြင်းမရှိသောကြောင့်အပူချိန်မြင့်မားသည့်အချိန်၌ပင်အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ တစ်ခုလုံး၏ကြီးမားသောတည်ငြိမ်မှုအပြင်ကေဘယ်ကြိုးများ၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်ပိုကောင်းသောအရာသည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ရိုးရှင်းမှုဖြစ်သည်။
ယခုငါဖော်ပြပြီးပြီ ဖြစ်၍၊ စျေးနှုန်းများသည်အတော်အတန်မြင့်မားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ရပြီး ၀ င်ငွေနည်းသောနိုင်ငံများတွင်အာမခံပစ္စည်းများကိုကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည့်တိုင်၎င်းပစ္စည်းများကိုသူတို့အတွက်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သာထားသင့်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောမည်သည့်လူသားမျှထိုနေရာတွင်ရှိသည့်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း၎င်းမှလိမ်လည်။ အမြတ်အစွန်းရရန်၎င်းတို့ကိုဤနေရာတွင်ပို့ပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဤကွန်ပျူတာများကို Rafo ကဲ့သို့သောလူများအတွက်လက်လှမ်းမီပါကယခုကျွန်ုပ်သည်ပန်းသီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမရှိတော့ပါ။
ငါသတိထားမိသည့်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိစဉ် Osx နှင့်အတူ Driver etcc ကို update လုပ်ခြင်းအတွက်အမြဲတမ်း motherboard, cpu, vga etcc ကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိ၊ အရာရာတိုင်းနှင့်ပြzeroနာလုံးဝမရှိသောအရာများဖြစ်သည်။ Rafo Team cucumber တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ သင်တစ်နေ့တွင် Osx ကိုသင်ကြိုးစားသည်အထိသင်မသိသောအရာတစ်ခုက Mac ပေါ်ရှိထိုစွမ်းအားထက်ဝက်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ငါက Apple အကြောင်းဘယ်တော့မှဒေါသထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါအပြင်ဘက်ကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်, ဒီဇိုင်းကိုလည်းအတွင်းပိုင်းဗိသုကာဖြစ်ပါတယ်။
တစ် ဦး ချင်းစီသည်မိမိ။ ငါချီးမွမ်းတဲ့ဒီဇိုင်းအတွက် Mac ရှိတာ၊ အားသွင်းတာကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး။ (သင်က၎င်းအားကုန်ကျမည်ဟုကောငျးကငျလိုခငျြလြှငျ) သို့သော်သူတို့က Pc ကိုပိုင်ဆိုင်သူအားပြောင်လှောင်ပြောင်လှောင်ကဲ့ရဲ့ကြသည်။
ထပ်ခါတလဲလဲပြောရရင်တော့ Mac ကိုကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့သက်ရှိတွေလို့ယုံကြည်ကြတဲ့အောင်မြင်တဲ့သုံးစွဲသူတွေပါ။ Hyunday ကိုင်ဆောင်သူများကိုလှောင်ပြောင်သည့် Porshe အသုံးပြုသူဘလော့ဂ်များသည် (နှင့်မကောင်းသောသူရှိလျှင်) ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
နှင့် Carlos ကြောင်းဆူညံသံရပ်တန့်ကျေးဇူးပြုပြီး။ ငါ့အတွက်၊ သင်နောက်ဆုံးရရှိခဲ့သော pc သည် Windows 95 ပါသော pentium II ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ PC များသည်ဆူညံသံများသို့မဟုတ်နိမ့်ကျသောအရာများမရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော့်အဖွဲ့သည်သခွားသီးမဟုတ်ဘဲအလယ်အလတ်တန်းစားပါ။ Core2ပရိုဆက်ဆာနှစ်လုံး၊ gygabite g41 board နှင့် DDR2 ram memory ပါဝင်သည်။ ငါဆွဲထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်အရာကိုငါမသိရပါဘူး။ ငါ့ရဲ့ dell optiplex gx 270 pc သည်ငါ့အဆုတ်၏ထိပ်ဆုံးတွင်အလွှာပေါင်းများစွာပါဝင်သော Adobe တီထွင်ဆန်းသစ်သော suite CS3 နှင့်အတူမပြေးဘဲကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝမတူပါ။ အသစ် heatsinks တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်အတော်လေးသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ယုတ္တိဗေဒသည်ကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာတစ်ဝက်နှင့်မတူပါ၊ သို့သော်သင်၏စျေးနှုန်း၏ထက်ဝက်နှင့်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကွန်ပျူတာရရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင် Apple သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာရောင်း ၀ ယ်သည့်အရာသည်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတွင်းပိုင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Intel processor, gygabite or Asus board, ddr2 memory ပထမအဆင့်အတန်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ pc ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်
သင်၏မှားယွင်းမှုသည်သင်၏မှားယွင်းမှုနောက်တဖန် -“ ယုတ္တိဗေဒသည်ကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာတစ်ဝက်နှင့်မတူပါ။ သို့သော်သင်၏စျေးနှုန်း၏ထက်ဝက်နှင့်အတူသင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကွန်ပျူတာရရှိသည်။ »
ထပ်ခါတလဲလဲဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်း Jaca 101 နဲ့ထပ်တူပြောမယ်။
ငါ raffa အထည်ထဲမ ၀ င်တော့ဘူး၊ မင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွေးတော့တာကြာပြီ။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ် snobs ၏ညီနောင်ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်သွားပါ။ YA PROBE MAC နှင့်ငါမင်းကိုအငြင်းပွားမှုများဖြင့်စကားပြောမည်။ သင်သဘောတူမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်စိတ်ထဲမပြည့်စုံခြင်းနှင့်သင်ရယ်စရာကောင်းသောအရာဝတ္ထုအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျကားလို့စ်စ် (အနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ထင်ထင်ရှားရှား) ငြင်းခုံနိုင်မှုအမြင့်ဆုံးနှင့်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သင်က၊ မင်းမှာ Mac ရှိတယ်။
ဟက္ကာနဲ့ mac mac vs hack တို့ကိုစိတ်ကူးပေးနိုင်တဲ့ဟာသဟောင်းတစ်ခု။
စက်ပြင်ကိုခေါ်ပါ၊ သူကားကိုကြည့်သည်၊ အင်ဂျင်ကိုကြည့်သည်၊ ကေဘယ်ကြိုးအချို့ရွေ့လျားပြီးအဆုံး၌သော့တစ်ချောင်းထုတ်။ ဝက်အူကိုတင်းကျပ်ထားသည်။
- ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘယ်လောက်ပေးရမလည်း။
- သူတို့ကယူရို ၅၀၀ ရှိတယ်
- ဝက်အူတင်းကျပ်ရန်€ 500?
- မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဝက်အူကိုအခမဲ့တင်းကျပ်ခဲ့သည် ယူရို (၅၀၀) သည်မည်သည့်ဝက်အူကိုတင်းရမည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။
Apple ကမင်းကို screw တွေတင်းကျပ်စွာပေးတယ်။
၎င်းသည်သင်သိမ်းဆည်းနိုင်သောယူရို ၅၀၀ ဖြစ်သည်။
Looney Tunes မှ Porky Pig ပြောသကဲ့သို့
“ ဒါတွေအားလုံးပါပဲ။ ဒါတွေအားလုံးပါပဲ
အဲဒါကိုသတ်မှတ်ဖို့ဟာသကောင်း။ ... သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအထူးလျှော့စျေးပေးနိူင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ serial အလုပ်ကြောင့်မက်တစ်လုံးလုံးကိုအတူတူပင် screw တစ်ခုတင်းကျပ်လိုက်တာ ၅၀၀ ထက်ပိုပြီးစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ဖြစ်ရမယ်။ Juas ငါနောက်တာပါ ကောင်းသောမှတ်ချက်😉
ငါကောင်းသော geek အဖြစ် jaca ဟာသသဘောပေါက်မဟုတ်ခဲ့ထင်ပါတယ် သငျသညျတဖနျသူ့ကိုပြောပြရန်ရှိသည်
"အ" ငါသိပြီ - I'm ငါ raffa အထည်ထဲမ ၀ င်ဘူး၊ မင်းမှာရှိတာကိုကြာကြာမစားတော့ဘူး။
ငါ့မှာ Mac Pro 1.1 (ပထမတစ်ခု) ရှိတယ်။ အဲဒါကမကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ hackintosh နဲ့မတူတဲ့အပြင်အခြား desktop desktop တစ်လုံးကိုငါဝယ်မယ်ဆိုတာသံသယဝင်တယ်။ ငါရှင်းပြလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့်အသင်းကကျွန်တော့်ကိုယူရို ၃၂၀၀ ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်၊ ၄ နှစ်အတွက် ၃ နှစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အကျင့်ဆိုးတစ်ခုပါ။ အဆိုပါအာမခံချက် (ပန်းသီးစောင့်ရှောက်မှု) ပြည့်စုံပြီးပါပြီ၊ ၎င်းသည် ၂-၃ နှစ် (ပို။ ယူရို ၃၀၀) တိုးရန်သင်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငါ hackintosh ကို ၀ ယ်ခဲ့ရင်ငါဟာတူညီတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု (သို့) ငါထက်ဝက်လောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းအောင်တူညီတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာကွန်ပျူတာကိုသုံးတဲ့ငါတို့ (ငါတို့ဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေမဖြစ်ရဘူး) ဟာ hackintosh ကို install လုပ်ဖို့အရမ်းခက်သလား။ ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးထောင်ပေါင်းထောင်ချီတဲ့ဖိုရမ်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ် (ရှုပ်ထွေးမှာမဟုတ်ဘူး) ။ အချိန်ဆိုတာနောက်တစ်ခုကအချိန်ဆိုတာပိုက်ဆံပဲ။ ဒါပေမယ့် hackintosh အစိတ်အပိုင်းတွေကိုရှာပြီးဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတပ်ဆင်တာကအရူးမဟုတ်ဘူး။
လူအများကပြောတာကသူတို့မှာအချိန်မရှိဘူး၊ သူတို့ဟာအချိန်မရှိဘူး၊ နှစ်ဆပိုပေးရတာ။ နှစ်ဆပိုပေးရမယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘဝရဲ့ ၂-၅ ရက် (တနင်္ဂနွေ) တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။ သူတို့ရဲ့လစာမှာ hackintosh ထက် ... နှစ်ဆထက်ပိုပြီးများတယ် ... သူတို့လုပ်ရင်သူတို့ကြွယ်ဝတယ်။ ငါ့ကိုရှုပ်ထွေးအောင်မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကသူတို့ငွေမနှမြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ထင်တယ်။
ထိုအချိန်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်၊ မထိုက်တန်သည်ကိုသူတို့အမှန်တကယ်အကဲဖြတ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုငွေကိုပျော်မွေ့ရန်အတွက်ပိုမိုကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်စာအုပ်ကောင်းများ (အနည်းငယ်ဖြစ်သည့်) သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်များ (အနည်းငယ်ဖြစ်သည့်) ။
၂ ရက်လောက်ရပ်ပြီးဖိုရမ်များကိုကြည့်ပြီးအလွန်ရှုပ်ထွေးသည်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ပဲဆုံးဖြတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်ကြည့်ရှုသူများမရပ်တန့်နိုင်သည့် LOT ကိုပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ဟာပျမ်းမျှကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူ (မိမိ iPod အတွက် iTunes သီချင်းပရိုဂရမ်ကိုလှည့်လည်ပြီးတပ်ဆင်သူ) အတွက်လက်တွေ့ကျကျမရှုပ်ထွေးနိုင်ဘူးဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်၌ငွေများစွာကျန်ရှိသည်ဟုပြောလိုလျှင်၎င်းကိုခရီးစဉ်များပေါ်တွင်မီးရှို့ပစ်မည့်အစားသင်ကလိုချင်ပါက Apple ကို hackintosh အစိတ်အပိုင်းများထက် ၁ နှစ်အာမခံချက်သက်တမ်းပိုပေးရန်ပေးလိုလျှင်၊ ၎င်းသည်မှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုကိုထားခဲ့ပါ။ အာမခံချက်ကိုတိုးချဲ့ရန်နောက်ထပ် hackintosh အသစ်၏ထက်ဝက်ကို (ယူရို ၃၀၀) ကုန်ကျမည်၊ သင်၏အာမခံချက်ကုန်သွားလျှင်အပိုင်းတစ်ခုသည်အခြား hackintosh အသစ်၏ထက်ဝက်ကို (ငါ့ mac pro အတွက် ၁ x1xt ဂရပ်ဖစ်ကဒ်သည်ယူရို ၃၀၀ တန်ဖိုးရှိသည်) ဖြစ်သည်။ ယူအက်စ် ၁၀၀ အတွက်ပီစီအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ ... ဟုတ်တယ်၊ ပိုကောင်းတယ်) အဲဒါကိုသေတ္တာထဲကထုတ်ပြီးအလုပ်စလုပ်ချင်တဲ့သူ (ကျော်ကြားတဲ့ S.Jobs boom) ... အဲဒီမှားယွင်းမှုကိုစွန့်ပြီးသင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက် nano-sweat အနည်းငယ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အပိုင်းပိုင်းနှင့် install-hackintosh အတွက်လာမယ့် - လာမည့်ပေးခြင်း။
နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့၏မွမ်းမံချက်များကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိသော Mac ပိုင်ရှင်များကိုမြင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Snow Leopard hackintosh (UPDATES DOORK အလုပ်လုပ်ကြသော်လည်း) ကိုသူတို့တပ်ဆင်လျှင်ဆက်လက်မွမ်းမံမှုများဆက်လုပ်နိုင်သည်ကိုကောင်းကောင်းသိသည် ၎င်းသည်ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ ... နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရှိလျှင်၊ အရာရာတည်ငြိမ်သည့်အခါအလုပ်လုပ်ရန်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် freehand ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရှိပြီးဖြစ်သည်၊ ဒီသရုပ်ဖော်ပုံ။
လျှို့ဝှက်သောသူတို့၊ တကယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်မှာပိုက်ဆံကျန်နေသေးလို့ပိုက်ဆံပိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောရင်လူတိုင်းကသူတို့ပိုက်ဆံနဲ့သူတို့လုပ်ချင်တာကိုလုပ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်သူတို့မှာမရှိတာကလူကြီးလူကောင်းတွေပါဘဲ။ ၅ ရက်သည်သူတို့၏ hackintosh ကို ၀ ယ်ရန်ရက်ပေါင်း ၅၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ သူတို့၏ရွှေခေတ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုသူတို့မြင်လိမ့်မည်။ ရေချိုးခန်းသို့သွားသည့်အချိန်၌ပင်လက်ပ်တော့ပ်ရှိလျှင်၎င်းတို့သည် surf လုပ်နိုင်ကြသည်။ ဖြေရှင်းပြီးပြီလား
Juan ကကောင်းပြီး Juan Jobs ကိုယ်တိုင် Steve Jobs ကိုယ်တိုင်သူ၏ platform ကိုအသုံးပြုသူများစွာအတွက်ရှက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသိသော်လည်း၊ သူသည်သူ၏ထုတ်ကုန်ကိုစားသုံးခြင်းနှင့် Mac hardware ၏ဇာတ်လမ်း (သူ၏ဇာတ်လမ်း) ကိုစားခြင်းကြောင့်သူနှင့်အတူသည်းခံရန်ရှိသည်။ Juan ကဲ့သို့ Mac အသုံးပြုသူများသည်ဤကဲ့သို့သောအရာမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာသောအခါပိုကောင်း။ ထို့ကြောင့်အချို့သူများကသူတို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ပိတ်ထားသကဲ့သို့ကျန်ရှိနေစေရန်အတွက်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့် Hack ကိုရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ထားသော Psystar နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများ၏ဒေဝါလီခံခြင်းကိုဂုဏ်ပြုကြသည်။ ၎င်းသည်မလွှဲမရှောင်သာလူကြီးလူကောင်းများဖြစ်သည်၊ ဂျော့ဘ်ကိုယ်တိုင်ပင်၎င်းကိုသိသည်။ Intel ပလက်ဖောင်းအားအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအလုပ်နှင့်အလတ်စားဗဟုသုတအနည်းငယ်ရှိသောအလယ်အလတ်တန်းစားစက်နှင့် Leopard ကို Windows7တစ်လျှောက်သေနတ်ကဲ့သို့သောသူများအတွက်တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည် စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများစွာပြသခဲ့သည့်အတိုင်းတူညီသော (နှင့်ပိုကောင်းသည့်) စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ထက်ဝက်ထက်နည်းသောငွေပေးချေမှုကိုပေးသည်။
Juan ပြောခဲ့သလို - မင်းမှာပိုက်ဆံကျန်ခဲ့ရင်လွှင့်ပစ်လိုက်ရင်အဲဒါမင်းအတွက်ပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်ကို ပို၍ တန်ဖိုးထားပြီးရေရှည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ hehehe, ဒီမှာရပ်တန့်ငါတော့ဘူး xD ယူနိုင်ဘူး။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့မအောင်မြင်တဲ့ကြိုးစားမှုများစွာပြီးနောက်ငါ MAC Os Lepoard ကိုဝမ်းနည်းဖွယ် Pentium IV တွင် run ရန်အကြံပေးပြီး ATI Radeon 200 နှင့် 512 RAM မှတ်ဥာဏ်နှင့်အတူဤ pc ၏စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ "RealteK" အသံကဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သမျှအတွင်းမှာပါ၊ စမ်းသပ်မှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်ကအဲဒါကို Hakintosh တစ်ခုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ စကားမစပ်, ငါ G4 box တစ်ခုအချည်းနှီးရရန်ရှိသည်, ငါကထဲမှာ pentium IV လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ငါသိပြီးသားဂရပ်ဖစ်ဖြစ်သည်ကိုငါသိသော်လည်း၎င်းသည်သဘာ ၀ အားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ယခုယခုအပတ်တွင် CD ကိုအသုံးပြုရန်မလိုဘဲ Mac ကိုသုံးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သင် Darwinx86 အကြောင်းသိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ခင်ဗျား၊ ငါ ၂ ပတ်နေပြီ။ အဲဒါကိုထိပ်ဆုံးမှာကြည့်နေပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တခြားစွမ်းအားကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ Windows & Mac Os.X2ရှိမယ်။ ဒါသူတို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်)
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုကောင်းသောချစ်ပ်လေးခုနှင့် manzanita များအတွက်သာကတ်ပြားတစ်ချပ်ပေးဆပ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရား၊ ကျွန်ုပ်နည်းနည်းလိမ်လည်လှည့်စားခံရသည်ဟုခံစားရသည်မှာဒီဇိုင်းသည်ခေတ်မီ။ တိုတောင်းလှသည်။ စီးပွားရေးကိုချဉ်းကပ်ဖို့၊ အကျိုးအမြတ်ကိုညီမျှဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထက်သာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာငါမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ငါအဲဒီလိုအဖွဲ့မျိုး၊
ပြီးတော့စျေးနှုန်းတွေ၊ မင်းတို့များသောအားဖြင့်တစ်ခုစီသုံးစွဲခဲ့ရာတွေအကြောင်းမင်းပြောနေတာက ...
သူ့အချိန်မှာဒီကနေ့ယူရို ၄၀၀ ကုန်ကျတယ်၊ ဒီနေ့မှာယူရို ၁၀၀ ထက်လျော့နည်းနေရင်မင်းမှာဒီထက်ကောင်းတာရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ Power Mac G400 ကိုရယ်မောတယ်ဆိုရင်၊ အကယ်လို့မင်းကယူရို ၁၀၀ နဲ့ရှိရင်အဲဒီငွေကိုသုံးမယ် ဟုတ်လား
ငါ Hak ၏နောက်လိုက်များကိုဆက်လက်တောင်းပန်သည်။ တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကျေနပ်နေပြီဖြစ်သောဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ၎င်းအချက်၏နောက်မှ Power G4 box ထဲတွင်ချိတ်ဆက်ပါကခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်သတိမပြုမိပါ။ , ငါဒီဇိုင်း, ပန်းသီး, နှင့် X Leopard ရှိလိမ့်မည် G4 အတွက်သူတို့က Mac OS 9.2.2 ထက်ပိုပြီးမရခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် (မသိဘူး .. )
Mac ကို install လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင် Acer Aspire One lolol အဖြူရောင်၊ xD လည်းမထည့်မှီတိုင်အောင် xD boot လုပ်ရန် cd မလိုအပ်ပါ။ ယခုတွင်သာပန်းသီးနှင့်ဓာတ်ငွေ့ကင်းမဲ့နေသည်
OSX ကို Pentium IV မှာ install လုပ်တာကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်စတိဗ်ဂျော့ဘ်၏အထက်တန်းလွှာမာကျောမှုကသာ Osx ကို Mac ကဲ့သို့အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သော်လည်းတစ်ဝက်မကသောကွန်ပျူတာများရှိရေထဲတွင်ငါးတစ်ကောင်ကဲ့သို့သွားခြင်းကိုတားဆီးသည်ကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
MAQUEROS အတွက်နေရာမရှိတော့ဘဲ Windows, OSX သို့မဟုတ် Linux ဖြစ်သည့်နည်းပညာနှင့်မည်သည့် operating system ကိုမဆိုအသုံးချနိုင်သည့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်နေရာမရှိတော့ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၎င်းသည် pc အတွက်နာရီနှင့်နာရီအနည်းငယ်သာအသုံးပြုရသောကိစ္စဖြစ်သည်။ osx သည် pentium IV တွင်မိမိကိုယ်ကိုတပ်ဆင်ရန် ၄ နာရီနီးပါးကြာသည်။ ပထမတော့ငရဲဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်အလွန်စောင့်ဆိုင်းနေရသောကြောင့်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောရလဒ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၄ ကြိမ်အကြာမှာတော့ငါထွက်ပြေးခဲ့တယ်၊ ဆိုးတာကအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်၊ OsX ကို "Kext" ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းပေါ့။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော် patch ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ install လုပ်ပြီးအချိန်နှင့်တပြေးညီသဟဇာတဖြစ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုကြည့်ပြီး၎င်းတို့ကို e-bay ဖြင့်ဝယ်ယူပါမည်။ နောက်ထပ်ခက်ခဲသောအချိန် ၄ ခုအတွက်တော့ Hackintosh နှင့်ငါလုံးဝသံသယရှိစရာမလိုပါ။ အထက်မှာဖော်ပြထားတာတွေကတော့ G4 box တစ်ခုနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာက၊ ကျွန်တော်တို့ဟာလျှို့ဝှက်ချက်အနည်းငယ်လောက်ပဲသိသည့်ငါတို့ မှလွဲ၍ မူလ mac ကိုဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ။ ခင်ဗျားလိုချင်ရင်ကျွန်တော့်ကိုစာရေးနိုင်ပါတယ်။ စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုဗဟုသုတတွေဝေမျှပေးပြီးအဲဒါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့လူတွေကိုများများတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ နောက်မှတွေ့မယ်!
ကျွန်တော့်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာနာရီပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခြင်း၊ များစွာသော kernel panic များနှင့်စိတ်ပျက်စရာများဖြစ်သည်။ Gygabite board၊ အနောက်တိုင်းဒီဂျစ်တယ် hard disk၊ Core2duo ပရိုဆက်ဆာ၊ Nvidia card စသည့်သဟဇာတဖြစ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုကျွန်ုပ်မတွေ့မှီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါပါပဲ။ ငါအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရန်ဒီဖွဲ့စည်းမှုကိုအကြံပြုသော်လည်းသင်၏ Pentium IV ကိုနှစ်သက်သည်။ အနည်းငယ်အနည်းငယ်ဒီလောက်လောက်။ ထပ်မံဂုဏ်ယူပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ pentium IV တွင် ATI Radeon X1100 ပါ ၀ င်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဘုတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့သည် Acer RC415-AM Soket 775 ဖြစ်ပါသည်။ တီထွင်မှုများပြုလုပ်လိုသူများအတွက်၊ eBay မှယူရို ၁၀ ဖြင့်ယူရပါမည်။ သူကကျွန်တော့်ကို Iatkos v10 နဲ့အတူသူရဲ့ hard drive ကိုစာဖတ်ခြင်းနဲ့ရေးသားခြင်းကနေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ 4G SATA ကိုသုံးတယ်၊ ဒါ့ကြောင့်သူကသူမသိတာတောင်သူသိလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး မှားတယ် HACKINTOSCHEROS ကိုနှုတ်ဆက်သည် !!!!
မင်္ဂလာပါ၊ အကယ်၍ မင်းမှာပိုက်ဆံရှိရင်၊ Mac ဝယ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူးထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် Xeon ပရိုဆက်ဆာတွေနဲ့ Mac pro အသစ်တွေ။ သို့သော်ယနေ့တွင် i7 ပရိုဆက်ဆာများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်သင်သည် hackintosh ၌ snow leopard ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ငါ့မှာ Snow Leopard ကိုရုပ်ရှင်ရုံတွေအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ LG LED ဖန်သားပြင်တွေတောင်မှသူတို့မှာအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိတာမို့လိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာငါကြားဖူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က laptop တစ်လုံးဝယ်ပြီးကျားသစ် iatkos 10.5.7 ကိုတပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယမော်နီတာနှင့် Wi Fi သို့ပြtheနာတစ်ခုသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဝိုင်ဖိုင်ကိုသုံးရန်လိုအပ်သည့်အခါ Ubuntu ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပမာဏကြောင့် leopard ကိုသာအသုံးပြုသည်။ ဗီဒီယိုနှင့်အသံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်နောက်ဆုံးဖြတ်စတူဒီယိုနှင့် Logic တို့အတွက်တည်ရှိသည်။
4 GB ကိုသိုးထီး ddr2
250 GB HD ဖြစ်သည်
အကောင်းဆုံးကိုဝယ်အတွက် 600 dlls သည်
ယနေ့အထိကျွန်ုပ်၌ကြီးမားသောပြproblemနာမရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတစုံတခုရှိပါက corevidia 1.1 နှင့် CI QE ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုကိုတည်းဖြတ်ရန်အတွက် Hackintosh အသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တော့မည်။ သတ္တုတွင်းအလွန်ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်စျေးနှုန်းများကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ dlls ၃၅၀၀ ခန့်အတွက် i3500 ပရိုဆက်ဆာနှင့် LG ဖန်သားပြင်နှစ်ခုဖြင့်ကွန်ပျူတာကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ Mac Pro ကို ၀ ယ်စရာမလိုတော့လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ဗွီဒီယိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် (ဗီဒီယိုသည်အရင်းအမြစ်များစွာကိုတောင်းခံသည်)
အကယ်လို့သင်ဟာဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးကိုသင်ကိုယ်တိုင်အပ်နှံမယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာပိုမိုကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြုလုပ်ရမယ်။ ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောငလျင်သည် Apple ၏ Macqu 8 cores Xeon ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူအရှိန်မြှင့်လိုက်သည်ကိုသိသောအချက်များဖြစ်သည် Corei27 ပရိုဆက်ဆာအဖြစ်။
ထို့အပြင် Mac Pro သည်အလွန်ဈေးကြီးသောမော်နီတာကိုမရေတွက်ဘဲကုန်ကျစရိတ်ယူရို ၃၀၀၀ ကျော်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကို Hackintosh တစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်းသည် i3,000 ပရိုဆက်ဆာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အမြင့်ဆုံးထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ Apple Computer တွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။
Mac ဝယ်ဖို့ကျွန်တော့်မှာငွေမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့မှာ hackintosh ရှိတယ်၊ သူကငါနဲ့အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်နေတယ်။ ငါ Snow Leopard ကိုသုံးတယ်။ SL ရဲ့ hardware ကို install လုပ်တာက windows တွေကို install လုပ်တာထက်ပိုမြန်တယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ imac core4duo ၏ဈေးနှုန်းဖြင့် 8-gb ram ရှိသော 2-core intel ရှိပါက Apple ၏ hardware တွင်ထိန်းချုပ်မှုသည်နောက်ခံတွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ပျော်ဖို့အတွက် Mac ဝယ်မယ်ဆိုတော့အခုငါ hackintosh နဲ့ကပ်နေမယ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ မည်သူမဆိုဤရေးသားမှုကိုပြုလုပ်သူမည်သူမဆိုမူရင်း Mac ၏အတွင်းပိုင်းတွင်မည်သည့်အရာရှိသည်မသိပါ။ ၎င်းသည် pc (အနုတ်လက္ခဏာ) ပါတူညီသည်။ ငါ့မှာ iMac ရှိခဲ့တယ်၊ ငါရောင်းလိုက်ပြီ၊ ငါ့မှာအခုရှိနေတာကိုစိတ်ကူးထားပါ။
Mac ရောင်းချသောပစ္စည်းသည် () ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တံခါးပိတ်လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးအခြားသူများထက် ပို၍ တည်ငြိမ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ hakintosh သည်ကျွန်ုပ်၏ကျောင်း၏ aluminium imac ကိုစားသည်။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသောအဓိက ၂ quad2၃ ခု disk ၅၀၀ gb ram ddr9550 ဂရပ်ဖစ် nvidia 3gt 500mb နှင့် gigabyte motherboard သည် repera nen နှင့် snow leopard နှင့် windows8 ဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်လျှင် 2e ပတ်လည်စျေးနှုန်းမှရှိသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကအခုစျေးပေါလာမယ်
အကယ်၍ သင်၏ hackintosh သည်သင့်ကိုဒေါ်လာ ၆၀၀ ကုန်ကျပြီး၊ Mac ဝယ်ယူခြင်းသည် ၅ နှစ်ကြာလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကုန်ကျသည်။ သူတို့ကခင်ဗျားတို့ရဲ့ hackintosh ကိုမလိုချင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့သူတို့က Apple ကသင့်ကို Apple ပန်းသီးဆိုင်မှာ iPod nano ကို ၀ ယ်ဖို့တန်းတူပေးလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လောက်ရရင် ၈ nuleos ရတယ်။ ပြီးတော့ ၄၀၀ အတွက်နျူကလိယ ၄ ခုရတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေပါတဲ့ Mac ကသင့်အတွက်ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲဆိုတာကြည့်ပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ hackintosh ကိုမူလ mac bios တွေနဲ့တပ်ဆင်ပြီးသားပါ။ သင်လိုက်ဖက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဝယ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ အဲဒီမှာလမ်းညွှန်များစွာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပါပြီ။ mac ကနေကောင်းမွန်စွာစုဝေးထားသည့် hackintosh သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာက၎င်းသည်ပိုမိုကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အပြင်ကိုလှပပြီးအပြင်အဆင်နှင့်အခြားသူများရက်အနည်းငယ်တွင်ခေါင်းကိုမစားရန်လိုအပ်သည်။ သင်အရာရာတိုင်းကိုလုပ်လိုလျှင် mac တစ်ချပ်ဝယ်ပြီးပိုက်ဆံချန်ပါ။ မှန်ပါသည် ... တစ်ကြိမ်လျှင် ... ကျွန်ုပ်တွင် 4- ရှိသည်။ Core hackintosh က ၁ ကြိမ်တောင်မပျက်သွားသေးဘူး။ နှစ်နှစ်ဂီတထုတ်လုပ်ဖို့နေ့တိုင်းငါအသုံးပြုနေတယ်၊ ​​ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်😛
အမှားမလုပ်မိစေရန်၊ သင်သည်ယူရို ၆၀၀ hackintosh ကို ၁၀၀၀ euro mac နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ၊ Hackintosh မှာဒီမှာ Mac ရဲ့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်အချိုးအစားရှိတယ်။ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချရန်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဂီတ၊ ဒီဇိုင်းစသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာလျော့ကျစေသည့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်များမရှိခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။
hackintosh ၏တည်ငြိမ်မှုသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယုံကြည်ရန်၎င်းကိုသင်အသုံးပြုရမည် (သင့်တွင်အရာအားလုံးစနစ်တကျရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး) ။ အကြင်သူသည်ကြိုးစားပြီးအောင်မြင်သောသူကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်တယ်။
သင်ပြောသည့်အရာ Jorge သည်ကောင်းမွန်သောနှစ်သိမ့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်သူသည်မည်မျှခက်ခဲသည်ကိုအဖြေရှာရန်နာရီနှင့်နာရီများစွာကုန်လွန်ခဲ့သောသူအတွက်သင့်တော်သောပစ္စည်းကိရိယာများကို ၀ ယ်ယူတပ်ဆင်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများနာရီအကြာတွင်သူသည်စျေးဆိုင်များစွာကိုထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့အဆုံးမှာတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ အကယ်လို့မင်းကံမကောင်းဘူးဆိုရင်ဖိုရမ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းများများဖတ်လို့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်သွားတယ်။ ကင်မရာနည်းတယ်၊ အသံနည်းတယ်၊ ဝိုင်ဖိုင်နည်းသွားတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သော်လည်းကျားသစ် xdd ကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးအတွက်၊ သင်မည်မျှပင်ခဲယဉ်းစွာသိမ်းဆည်းထားပါကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကိုမေ့သွားသည်။ နောက်ဆုံး၌သင့်တွင်ကြိုးများပါရှိသည့်တာဝါအပိုင်းအစတစ်ခု၊ ၇ ခု Socket power strip အပြင်မော်နီတာနှင့်အပိုပစ္စည်းများကဲ့သို့သော စပီကာများ၊ ကင်မရာ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာဆူညံသံ၊ အပူ၊ အရွယ်အစားနှင့်အပြည့်အဝစားနိုင်သောစားပွဲတစ်ခုလုံး။
ဒီဟာတွေကိုစဉ်းစားဖို့မသင့်တော်ပါဘူး၊ အဲဒါဟာမင်းအတွက်အလုပ်လုပ်မှာပါ၊ ငါ ၀ မ်းသာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အချိန်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။
Carlos, hackintosh ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူအားလုံးသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကြောင့် mac ကိုပိုကြိုက်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင် mac မရှိလျှင် Intel hackintosh ကိုအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျနော့်ကိစ္စကိုတော့အများကြီးလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက pkg file နဲ့ install လုပ်တဲ့အသံကလွဲလို့အရာအားလုံးကိုမှတ်မိလို့ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံက AMD အပါအ ၀ င်တခြားကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာထည့်သွင်းဖို့သင်ယူစေခဲ့တယ်။ သူတို့တကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ kernel ကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းတပ်ဆင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
ငါအရင်ကပြောခဲ့သကဲ့သို့ Mackeros အတွက်နေရာမရှိပေမယ့်သင့်ရဲ့စက်ကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချနိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေအတွက်ပါ။ ငါ၌ရှိသော hackintosh သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးကျားသစ်နှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ မူရင်း Mac ရဲ့လှပတဲ့ဒီဇိုင်းကိုငါသဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံရရင်ရိုးသားမယ်၊ ငါမ ၀ ယ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုဖြစ်ရင်ပန်းသီးလိုဂိုနဲ့မပြရဘူး။ ငါပိုကောင်းတဲ့၊ စွမ်းအားကောင်းတဲ့စက်တစ်လုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပထမတန်းစားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော Asus boards, Kingston memory, Intel processor, Western Digital Disk, Windows7နှင့် Snow Leopard နှစ်ခုလုံးကိုပြproblemsနာမရှိဘဲကိုင်တွယ်နိုင်သည့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်။
ကံမကောင်းစွာပဲစတိဗ်ဂျော့ဘ်သည် Ipod, Iphone, Ipad နှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အတူအောင်မြင်မှုများအပြင် PC များတွင်လည်ပတ်ရန် Apple OS ကိုစတင်ပါကစျေးကွက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုရယူရန်အခွင့်အလမ်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ Macite, PcX, ဒါမှမဟုတ်သင်လိုချင်သမျှကိုမင်းရဲ့အထက်တန်းလွှာလူမိုက်တွေကမငြိုငြင်နိုင်ဘူး။ ဒီနည်းနဲ့ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့ ၀ င်းဒိုးဘယ်လောက်များများသင့်ရဲ့ရာထူးနဲ့ပူးပေါင်းမှာလဲ။
တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းအတွက်အားသာချက်များအားလုံးနှင့်အတူ၎င်း၏အားနည်းချက်များကိုအဘယ်သူမျှမရှိလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Linux ကိုအဓိပ္ပာယ်အောင်ရပ်တန့်လိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ Apple ဟာပြreignနာမရှိဘဲအုပ်စိုးပြီး Windows ကိုပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်လိမ့်မယ်။
HACKINTOSH သည်၎င်းကိုအထောက်အထားဖြစ်သည်။ မမြင်နိုင်သောသူများကို။
ကောင်းပြီ၊ ကံမကောင်းတာကိုငါမသိပေမယ့် ၁၀၀% အလုပ်လုပ်တဲ့ hackintosh ရှိတယ်၊ ငါနဲ့ပြproblemsနာရှိတာတစ်ခုတည်းက startup မှာ (OS တပ်ဆင်ခြင်း DVD ကိုထုတ်ယူခဲ့ရင် OS မတင်ဘူး) နဲ့ USB ပေါ်မှာ အချို့သောအမှတ်တရများ (သို့) စက်ကိရိယာများ (ဥပမာ - မောက်စ်၊ ကီးဘုတ်နှင့် Iphone တို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ပြproblemsနာမရှိဘဲအသိအမှတ်ပြုခြင်း) နှင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲဖြေရှင်းခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးသိပ်မရှိသောသူများအတွက်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခု ...
ကောင်းပြီ၊ ငါဒေါ်လာ ၁၀၀၀ သုံးစွဲတဲ့ hackintosh နဲ့သုံးလလောက်ရှိတယ်။ ဝိသေသလက္ခဏာတွေကတော့ Intel Core 1000 quad2ပရိုဆက်ဆာ။ Snow Leopard ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ (၃.၁၀ Quad Core Intel xeon) gigabyte Mid-range motherboard, 3.0 ဂရပ်ဖစ်ကဒ် ၅၁၂၊ သိုး ၄ ဂစ်ဂါဘစ်၊ ၃၂၀ ဂီဂါ့ဒ် hard drive၊ Mac pro ၏လက်တွေ့ပုံသဏ္theာန်။
ငါ DJ တစ်ယောက်ပါ၊ တခါတလေကျောင်းသူ / သားများဗီဒီယိုများတင်သောအခါသူတို့မှာမူရင်း macs တွေသယ်ဆောင်လာကြပါတယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ i7 နှင့်အတူအရာအားလုံးနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့ macbook pro အသစ်တစ်ခုရလာပါပြီ။ imovie, ငါသူတို့ကိုတစ်မိနစ်ခွဲခွဲထားခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကမူလဆိုတာသူတို့တည်ဆောက်တာထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမဆိုလိုပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာ Mac က Intel နဲ့ Intel ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်နိုင်တယ်၊ TJJUANA BC မှအရေးကြီးဆုံးသောအရာ (PROCESSOR) နှုတ်ခွန်းဆက်သည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ အမှန်တရားကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အလွန်တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ ငါ pc တစ်သက်လုံးသုံးခဲ့ပေမယ့် mac ကိုပြောင်းချင်တယ်။ အဓိကအချက်ကစျေးနှုန်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကငါ့ရဲ့ laptop ကို hackintosh အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပါပဲ။ ငါ့လက်ပ်တော့ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကနှင်းကျားသစ် iATKOS5i 10.5.5 ကိုထောက်ပံ့ပေးမလားမသိဘူး
ကျွန်ုပ်၏စက်သည် compaq presario f700 ဖြစ်ပြီး 2gbram နှင့် AMD TURION 64 MOBILE TK55 ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပါ ၀ င်သည်။
MMX (+)၊ 3DNow! (+), SSE (1,2,3), x86-64 AMD-V ။ ပြီးတော့ 120GB hard drive ကျိုးနွံမှုတစ်ခု။ ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်လဲ ... အဲဒါကို install လုပ်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။
Mac-no၊ Linux-yes ဟုသူကပြောသည်
Maceros, မင်း Linux သုံးဖူးလား
၎င်းသည် Unix အားလုံး၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
မသိသူများအတွက် Unix သည်အကောင်းဆုံး OS ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်တွင်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရာမရှိပါ။
၎င်းသည် Mac ထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ Mac သည် Pseudo Unix ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ... Linux သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့နှင့်စေတနာအလျောက်ခံရသည်။ အကောင်းဆုံးမှာ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
LINUX BY တွန်း။ အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးလူသား - စက်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်မသွားပါစေနဲ့
Mac-no၊ Linux-yes သို့ပြန်ပြောပါ
ပုံမှန်ယောက်ျားလေးသည် ၄ ​​ရက်ကြာ Debian နှင့်အတူအဆင်သင့်ရှိနေပြီးစိတ်ကူးမရှိဘဲတစ်ခုခုကိုဝါကြွားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ကောင်းပြီ…ကမ္ဘာကြီးသည်လမ်းခရီးတွင်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် linux သည်မကောင်းကြောင်း၊ မှတ်ချက်ပြုထားခြင်းသည်မမှန်ပါ။ စတင်ရန် linux သည် unix မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ gnu / linux အတိုကောက်များအားလုံးသည်“ not is unix” ဟုပြောကြသည်။ ၎င်းသည် minix အပေါ် အခြေခံ၍ ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်းစိတ်ကူးနည်းသူမည်သူမဆို Mac OS သည် unix နှင့်ဆင်တူသည်ဟု (freebsd မှလာသည့် Darwin bsd) linux ထက် ပို၍ ပြောနိုင်သည်။
ဘယ် unix ကအကောင်းဆုံး operating system ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့အထီးကျန်ဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ Linux သည်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်း (အများစုသည်အများစု) သည်၎င်းတွင်တည်ရှိမှုရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောအပြိုင်အဆိုင်လည်ပတ်သောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းသည်ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ကုမ္ပဏီ၏ထက်များစွာနည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည် စနစ်ကပြောင်းလဲလာသည်။ မည်သူမဆိုဤကိစ္စမျိုးမဟုတ်ကြောင်းသင့်ကိုပြောသူက ... မင်းကိုဗြောင်ကျကျလိမ်ညာနေသည်။ ၎င်းတွင်သင့်တွင်အထောက်အပံ့မရှိကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုအလွယ်တကူလွယ်ကူစေသည့်စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီများ၏အသုံးချပရိုဂရမ်များသည် Mac OS X ကဲ့သို့သောအခြားစနစ်များပေါ်တွင်သာရှိသည်။ linux (ဥပမာ - Photoshop၊ ဂိမ်းများ၊ ) ။
တည်ငြိမ်မှုအတွက်, မထင်မှတ်လာကြကုန်အံ့ linux * bsd သို့မဟုတ်အခြားန်းကျင်အခြားလမ်းထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်ကြောင်းပြသကြကုန်အံ့ ... ငါနှစ် ဦး စလုံးဤအမှု၌အကောင်းဖြစ်ကြပြီးငါမဆိုသာလွန်စဉ်းစားကြဘူး။
အခမဲ့လည်ပတ်ရေးစနစ်တွန်းအားပေးရန်ပုံရသည်။ သို့သော် (ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်) ၎င်းကို (ပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးခြင်း) ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီခြင်းနှင့် Mac OS X ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်စစ်မှန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားကျွန်ုပ်ကကူညီလိုသည်။
Mac-no, Linux-yes, ငါ့ကို mac ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ Linux အတွက် adobe creative suite CS5 ကို run ပါစေ။ အဲဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းသွားမှာပါ။ မဟုတ်ရင် ubuntu themes များကို install လုပ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုရည်စူးပြီး၊ သိတယ်
၁၃၈ နှင့် ၁၃၉ သည်သင်ဂိုဏ်းဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်ကိုကိုက်ညီသည်။
"not is unix" အတိုကောက်သည်စကားလုံးများဖြင့်ပြဇာတ်ရုံမျှသာဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးအင်တာနက်ဆာဗာများသည် Linux ကိုသုံးသည်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးစူပါကွန်ပျူတာ (၅၀) သည် Linux ကိုသုံးသည် (၎င်းကိုပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေနှင့်ငါစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ)
ငါပြောပါရစေ၊ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် Unix ထက် ပိုမို၍ အဆင့်မြင့်သောအယူအဆမရှိပါ (နှင့် linux အယူအဆမှာ Unix ဖြစ်သည်)
Mc သည် Unix တစ်ခုဖြစ်သည်
Haquer သည် linux ကိုအသုံးပြုသည်။
Linux နှင့်တကယ့်ပြproblemနာသည်စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် Window နှင့် Mc သည်လူသိရှင်ကြားဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုရှုတ်ချခြင်းနှင့်သင်ကဲ့သို့သောသူများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းတို့သည် lobis များအနေနှင့်နိုင်ငံရေးအရတွန်းအားပေးနေသဖြင့် Linux ပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နိုင်ငံရေးသမားများ (အမျိုးသားအဆင့်သို့မဟုတ်ဥရောပအဆင့်တွင်) က၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေ့တွင် Windows နှင့် Mc သည်သေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့် Mac ကိုအသုံးပြုပြီး virtualbox virtual machine တစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ Windows7နှင့်တစ်ခုမှာ debits များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များအကြားကွဲပြားမှုကိုရှာဖွေရန်မရည်ရွယ်ပါ။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူ။ ငါ iMac ကိုသုံးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကငါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စက်တစ်ခုပါ။ လှပပြီးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တည်ဆောက်မှုကြောင့်ငါအများဆုံးသုံးတဲ့ OS ကတော့ logic pro 9, final cut လို tools တွေထောက်ပံ့နိုင်တဲ့စွမ်းအားကြောင့်၊ စသည်တို့ ... ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ဂီတပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးနှင့်စီနာလာရာတို့တွင်ဤမျှလောက်နောက်ကျကျန်နေသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲရှည်လျားသောဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်လိုသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်သူပေးသောအသုံးပြုမှုနှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်အရာများအတွက်သီးသန့်ဆာဗာတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် cpanel ပါ ၀ င်သော Linux centos တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဂြိုဟ်ကိုလုံလောက်စွာခွဲထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များအကြားခွဲခြားခြင်းကိုမထုတ်လုပ်ကြပါစို့။
စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ င်းဒိုးများ (သင်အဆိုအရ) နှင့် macs များဖြစ်သောကမ္ဘာ၏အံ့ and ဖွယ်ရာနှင့်ပြီးပြည့်စုံမှုတို့အကြောင်း post တစ်ခုတင်ပြီးသောအခါ ... "div's generate to our" ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်နားမလည်နိုင်ဘူး ... စကားမစပ် ... ငါကိုယ်တိုင်လည်းဂီတလုပ်တယ်၊ တည်းဖြတ်တယ်၊ အသံတွေပြန်ပေးတယ် ... ငါ pc တွေ ၀ င်းဒိုးတွေနဲ့အတူသယ်ဆောင်လာတယ်။ ... ဒါကငါ့ကိုတစ်ဝက်ကုန်ကျစေတယ် ... ခန့်မှန်းလို့ရတယ် ... လူတိုင်းမေးကြည့်ပါ။ မင်းဘယ်လိုလုပ်နေလဲ .. ငါသူတို့ကိုငါပြောလိုက်တယ်။ Apple ကမင်းဆီကခိုးယူနေတယ်။ စျေးကြီးတဲ့အတွက်ကုန်လွန်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးတယ်။ ... ဖက်ရှင်ဝယ်သူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ် ..
သူတို့လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက် Push တစ်ခုချင်းစီကသူတို့နှစ်သက်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ဟာ Mac ဒါမှမဟုတ် PC ကိုအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့အရေးမကြီးပါ။ linux အကြောင်းဘာမှသိဖို့မလိုတော့ဘူး၊ ကိုယ့်လိုမင်းအမှားတွေကြောင့်ကြက်ဥတွေကိုခွဲခြမ်းဖို့အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့လူတိုင်း linux ကိုတဖြည်းဖြည်းချစ်မိသွားပြီးငါမုန်းတော့တယ်။
Linux တစ် ဦး ကအမှန်တကယ်
ပြီးတော့ပန်းသီးကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြသချင်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့နောက်တဖန်မဖတ်ပါနှင့်။ သို့သော်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်မတူပါကရည်ရွယ်ချက်ရှိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်၏အငြင်းပွားမှုများနှင့်အဖြေများကိုဖတ်ပါ -
ဤရာထူးဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဒဏ္myာရီများကိုသာဖော်ပြရန်၊ ဖျက်သိမ်းရန်နှင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန်လွတ်လပ်သောပွင့်လင်းမှု၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနှင့်အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်စရာရှိကြောင်းပြသရန်သာရည်ရွယ်သည်။
- GNU / LINUX PROJECT ကို ၁၉၈၃ တွင် Richard Stallman မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Unix operating system ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
- MINIX သည်ဝီကီမှ Unix လည်ပတ်မှုစနစ်၏ပုံတူပွားများဖြစ်သည်။
- BSD ... .. ... ။ Unix system မှဆင်းသက်လာသော operating system တစ်ခု…။ (ဝီကီကနေ) ။ အရာရာတိုင်းဟာ SSOO ၏မိခင်ဖြစ်သော Unix မှဆင်းသက်လာသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမရှိပါ။ ငါ Mc ကိုသူကိုတစ် ဦး ကန့်သတ် unix သည်ပြန်လုပ်ပါ။
- စီးပွားဖြစ် Unixes များသည် Linux သို့လက်နက်ချခဲ့ပြီး Solaris ကိုယ်တိုင်အပါအ ၀ င်အဆုံးသတ်သွားသည်။
ဥပမာအားဖြင့်နှိမ့်ချ Ubuntu (Linux desktop) ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည် Mac နှင့် Win တို့အကြောင်းပြောဆိုခြင်းထက်သာလွန်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက်၎င်းသည်ပထမနေ့အဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ပြီးဝင်းနှင့်မက်စ်တို့ကဲ့သို့ခက်ခဲသောအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ထိုအခါငါကအခြားပိုပြီး "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်" distros အကြောင်းကိုသင်ပြောပြမဟုတ်ပါဘူး။
- ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားမှုများ - လင်းနို့အတွက် (Adobe CS, Illustrator, Autocad, MSOfice ကိုယ်တိုင်စသည်ဖြင့်) Linux အတွက်စီးပွားဖြစ် application များမရှိခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားသူများသည်၎င်းတို့လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်း၏အဆက်မပြတ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့မတည်ရှိကြောင်းဂရုပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤအပလီကေးရှင်းများသည် Wine ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်အင်္ဂါရပ်များမရှိသော်လည်းအရာအားလုံးအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ Linux သည်မတားဆီးနိုင်ပါ။ ဝဘ်တွင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သောဂူဂဲလ်သည်၎င်းတွင်ရှိနေပြီးအခွင့်အလမ်းကောင်းသည့်ယောဘနှင့်ဂိတ်တုန်လှုပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၊ သင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လျှောက်လွှာများကိုအသုံးပြုပါကသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်စကားပြောနေလျှင်၊ သင်ကမက်သို့မဟုတ်ဝင်းတွင်ရှိသည်ကိုနားလည်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင် Linux ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလိုက်နာရန်အကြံပြုလိုသည်မှာ မဝေးတော့သောအနာဂတ်သို့မဟုတ်ယခုပင်လျှင်ငါသည်သင်တို့ကိုဒီစပိန် (ဒီဇိုင်း link ကိုထားခဲ့ (joaclintistgud.wordpress.com) ။ ထိုအခါငါသတိရပါ, သတိပညာဖြစ်ခြင်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကိုကောင်းစွာ (နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကိုဖတ်ပါ) ဖုံးလွှမ်းနိုင်အခမဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်အခမဲ့ application တွေအများကြီးရှိသည်သတိရပါ။ တစ်ခုခုလိုအပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့် ၁၀၀% တရားဝင်ရန်မည်မျှအဆင်ပြေသည် (နှင့်စျေးပေါသည်) ကိုသင်မသိပါ။
- MOBILE မှ SUPER COMPUTER သို့ - Linux သည်စူပါကွန်ပျူတာများတွင်အလုပ်လုပ်သကဲ့သို့မိုဘိုင်း (LiMo နှင့် Android)၊ ဝက်ဘ်ဆာဗာများ (အကောင်းဆုံး)၊ စားပွဲခုံများ၊ e-Book စာဖတ်သူများ၊ ကွန်ပျူတာစစ်ဆေးသူများ။ စနစ်၊ မိုဘိုင်းဒေတာဖတ်ရှုသူများ ၎င်းသည်ကြီးမားသောဒေသဆိုင်ရာကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများတွင် (Win နှင့် WinNT တို့ထက်များစွာသာလွန်သည်။ ) (mac သည်သူတို့၏အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံကိုအထောက်အပံ့အဖြစ်သုံးသောမည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မျှမ) စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်မိုဘိုင်းမှစူပါကွန်ပျူတာသို့ (ပျော့ပျောင်း။ Hard Platform) ဖြစ်သောမည်သည့်စက်ပစ္စည်းအတွက်မဆိုစကြဝERSာစနစ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
အခမဲ့အသုံးပြုသူများ - MC သို့မဟုတ် Win မှ Linux သို့သွားသောမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုသူတို့လိုအပ်သော desktop ဆော့ဖ်ဝဲလ်အားလုံးကိုအခမဲ့နှင့်အခမဲ့ရလိမ့်မည်။ ရုံးများစွာ၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတွင်ပိုမိုများပြားပြီး၊
သင်၏ Linux ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် hack စရာမလိုဘဲအခမဲ့ application များကိုစတင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ လိုင်စင်၊ မွမ်းမံမှုများအတွက်ပေးဆောင်ခြင်း၊ သရေဖျက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ malware၊
Linux ကိုသင်သိလိုလျှင် live Ubuntu CD (ပြည်တွင်းအများဆုံး) ကို download လုပ်၍ သင်၏ pc သို့မဟုတ် mc (၎င်းသည်သင်၏စနစ်ကိုလုံး ၀ ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်) တွင် run ပါ။ ရှင်းလင်းပြီးသောအခါ၎င်းကို Win (သို့) Mc နှင့်မျှဝေပါ (linux အသိုင်းအဝိုင်းတွင်သတင်းဘလော့ဂ်များစွာရှိသည်)
- ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လောကကို3+ 1 (မိုက်ခရိုဆော့၊ အက်ပလီနှင့် Adobe + Autocad) ကလွှမ်းမိုးထားသည်။ ခွေးတွေကြားမှာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အကိုက်မခံကြဘူး။ အထူးသဖြင့်ကိတ်မုန့်ဟာအရည်ရွှမ်းပြီးကမ္ဘာကြီးကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးငါတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့သုံးယောက်အတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးပေးတယ်။
ပါရန်oya? အဘယ်သူမျှမသတ္တဝါ, ငါသည်သင်တို့ကိုရိုးရှင်းသောဖြစ်ကြသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Gate နဲ့ Job တို့ဟာကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့စိတ် ၀ င်စားမှုရှိအောင်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့၊ ငွေရေးကြေးရေးအရအမျိုးသားတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ မင်းလိုလူတွေရဲ့အစိပ်စိပ်နဲ့အထောက်အပံ့တွေနဲ့မတူဘူးလား။ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ သတင်းများစသည်တို့နှင့်လည်းအစာနှင့်လည်းတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ Big Brother အကြောင်းမကြားရဘူးလားငါအမှိုက်တီဗီအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏ရိုးရှင်းသောအတွေးကနားမလည်လျှင်ပင်ငွေနှင့်အစွမ်းအစရှိသည်။
- RRP: ကိုးကားစရာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စပိန်ရှိ MCO ၀ န်ဆောင်မှု (MC နှင့် Win အတွက်) သည်ယူရို ၁.၀၀၀ ကျော် (အခြေခံ CPU နီးပါး) ကုန်ကျပြီး Adobe CS သို့မဟုတ်မြို့တော် Photoshop အကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
အခမဲ့မဟုတ်သော OppenOfice သည်ယူရို ၀.၀၀ ကုန်ကျပြီး၎င်း၏ format သည် .doc ထက် ပိုမို၍ စံနှုန်းရှိပြီး MSOfice ၏အောက်ပိုင်းဗားရှင်းများကိုမဖွင့်သော docx ကိုဖွင့်သည်။ GIMP, Inkscape, Blender, VLC၊ တေးဂီတလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဂိမ်းများ (discreet, yes) စသည်တို့ကိုမပြောရန်ဥပမာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ဤအခမဲ့နှင့်ပုံပေါ်သောသတိပညာရှိကိရိယာများနှင့်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ စကားမစပ်, အခမဲ့အသိုင်းအဝိုင်း MC နှင့်ဝင်းလည်း compile ။ ဒါကရက်ရောသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုအတူတူမပါကိုကြည့်ပါ။
စကားမစပ်, သင် Mc ၏ပိတ်ထားသောကုဒ်နောက်ကွယ်မှဘာလဲသိသလား နှင့် Win puffffffff ။
ဒါကအခု ၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းကပေါ့။ Mac ကလွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်ပြီးပြupdatesနာမရှိဘဲအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေက mac ဟာ fucking pc ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးလှတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါ smurf ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်ပြောသောလူအများစုကပင်မသိသော ဘာလဲ
ငါနီးပါးပြီးပြည့်စုံသော desktop operating system ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလျှင်
ငါအမှားလုပ်မိရင်သင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ desktop operating system တစ်ခုသုံးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူမိလျှင် Hakintosh, ah jaca101 ကို mount လိုက်ပါ၊ အခြား Ghost ပြောတာကိုသင်ဘာတွေဂရုစိုက်သလဲ။
ငါအမှန်အကန်ပြောရရင်ငါ Asus N73 ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ Core i7 ကအပြာရောင် Ray ပါလာတယ်။ ငါ Boot Windows နှစ်ခုသုံးပြီးငါ hackintosh လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါကကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီဇိုင်နာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းပျော်တယ်။ $ 3000.00, ငါ ehhh ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာပိုကောင်း?
mac osx ကို update လုပ်လို့ရလား။
တစ်ခုမှာ x x ကို aki ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါအလုပ်လုပ်ဖို့ခြင်္သေ့နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် logic pro9နှင့်အတူ hackintosh ကိုအသုံးပြုပါကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်။
တစ်ခုမှာ k မှပြန်ကြားချက် x aki ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
TeChno PRO ဟုသူကပြောသည်
I Hackintosh ပရိုဆက်ဆာလေးတစ်ခုနှင့်အတူ4Nukleos4Gigs ram, LOGIC9VuEEEELA !!!
သင်လိုချင်တာကိုမဖြည့်ပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တွင် (၃) နှစ်မျှသာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည် A butt ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ (၁) တွဲတွဲရှိနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ installation ကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ကုန်ကျသည်။ A. ကျွန်ုပ်သည်မူရင်း ၁၀.၅ ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်,
TeChno PRO အားစာပြန်ပါ
ငါ hackintosh ကိုရောင်းတဲ့ pc bargains ကိုငါမြင်ခဲ့ပြီ၊ ငါကတကယ့်လိမ်လည်မှုပုံရတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ဟာ imac ထက်ပိုတယ်
PerTxa Ashanti ဟုသူကပြောသည်
ဤထင်မြင်ချက်များကိုကြည့်ပါလိုလားသူ Mac လိုလားသူ dais! သူတို့ကနည်းနည်းဆွေမျိုးများမှာ! ငါဟာတစ်သက်လုံးကိုယ်ပွားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​နောက်ပိုင်းငါ imac ကိုသွားခဲ့တယ်၊ သင်အခန်းထဲမှာဆေးလိပ်သောက်နေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာမီးခိုးတစ်ခုခုရှိရင်သူတို့ကမီးခိုးစုပ်တဲ့အခါသူတို့ကအစွန်းအထင်းတွေထွက်လာတယ်။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသော၎င်းကိုဖယ်ရှားထားသောဖန်နှင့်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်၍ ပင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ငါယူရို 1.125 သုံးစွဲ! km အတွက် Appel ၏နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကို“ ဘယ်လိုလဲ? ။ အိမ်မှာဆေးလိပ်မသောက်ဖို့သူတို့အကြံပေးတယ် ... ခင်ဗျားကေဒါဘယ်လိုနေလဲ။
လူကိုလာကြပါ !! သူတို့သည်လိမ်လည်သူများဖြစ်ကြသည်။ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ Iphone4ဟာနှစ်ခါကွဲသွားပြီ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သူတို့ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအာမခံချက်အဆုံးရောက်ပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဒုတိယအကြိမ်ကတရုတ်ကိုယူသွားတယ်။ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုမှစမတ်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မပြင်ပေးသောကြောင့်သူတို့က Leuros ၁၇၀ အတွက်သာအသစ်တစ်ခုကိုလဲလှယ်ခဲ့သည်။ "Full- လွလူသတ်မှု။ " ။
အနည်းဆုံး k မှာ hackintosh ရှိတယ်၊ သင်စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေနည်းပြီးပိုက်ဆံနည်းနည်းနဲ့အမြဲပြင်ဆင်နိုင်လိမ့်မယ်။ နှင့်အားလုံးအထက်တွင်အများဆုံးပရိုဂရမ် obsolescence နှင့်အတူကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံး Imperialist နှင့်လှည့်စားကုမ္ပဏီများမှတစ် ဦး မှအထောက်အကူပြုရန်။ ။ ။
ဒါပေမယ့်ဒီဟာကျွန်တော့်အမြင်ပဲ။ ။ ။ နှုတ်ဆက်ခြင်း!! MAC အပိုဆောင်း
PerTxa Ashanti အားစာပြန်ပါ
အမှတ်ကတူညီတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ထွက်မလာပါဘူး။ ငါဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ လက်ရှိတွင် Mac Pro (အမှိုက်ပုံး) နှင့်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာများစွာခံစားရပြီးနောက်မီးပုံအပူဒဏ်မှသည်ဗီဒီယိုကဒ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ခြင်းအထိ Hackintosh ကိုစမ်းကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင်ငါက 9-GB RAM, RX64 ဂရပ်ဖစ်နှစ်ခုနှင့် BenQ ကနေမော်နီတာ (သင်တန်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်) နှင့်အတူ, 5700-core iXNUMX စက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Mojave (Catalina မှထွက်ပြေးသွားသူ) သည်ရိုက်ချက်တစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သောအချက် မှလွဲ၍ iMac Pro ကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အပူချိန်အပြည့်အ ၀ ရိုက်သည်။
ငါနဲ့တူတူပဲလား မဟုတ်ပါ။ တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပန်းသီးအတွက်ကုန်ကျမည့်အရာ၏ထက်ဝက်ထက်သက်သာပါသည်။